MySuboo - <marquee direction=right> ''my suboo ပေါ်ကငါ့ရဲ့ blogs နေ့စွဲများ....''</marquee> - Blog
GraphicsMyspace LayoutsMyspace Layouts
''my suboo ပေါ်ကငါ့ရဲ့ blogs နေ့စွဲများ....''
♣ မွေးတစ်နေ့ အလင်္ကာ
အဝေးကြီးတွေးကြည့်နေဖို့ မလိုတော့တာသေချာနေတာတောင် အပိုဆာလာတွေက ဘာလို့ထပ်နေချင်ရတာလဲ? အမြင့်ပျံငှက်တွေအားလုံးအတွက် အသိုက်မှာနားနေဖို့ အချိန်ကသိပ်မလုံလောက်စေရဘူး ( တစ်ပိုင်းတစ်စ ယောနသံဇင်ယော် - မှ ) တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေက မှတ်ချက်ကနေ သွေဖီထွက်တတ်ကြတာ လောကသဘာဝဟု မြင်ယောင်ပေားကစမ်းပါ တောင့်တ ကြောင့်ကြ ပူဆွေး သောကတွေ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတာတောင် ကူကယ်ရာမဲ့တဲ့ဘ၀ရောက်သွားခြင်းဟာ ' စစ်မှန်သောချမ်းသာခြင်း ' မည်စေသတည်း ( လူတစ်ယောက်၏ဆုတောင်းနေသောအသံ ) ဒဿနဟူသောခေါင်းစဉ်တွေ သိပ်တပ်မနေချင်တော့ပါဘူး လက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင် မျက်လုံးပေါင်းတစ်သိန်းအောက်ရောက်နေတာက ကုဋေရှစ်ဆယ်သူဌေးသားမှ ဟုတ်ပါလေစ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်........ ကျနော်ဆိုသော ကျနော်သည်လည်း တစ်နေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာ.........။ ညခါးခါးက မိစ္ဆာငှက်တို့ရဲ့ အိပ်တန်းပျံချိန်ကို အတိအကျ သိမ်းပိုက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် ပေးဖူးလွှာအားလုံးကို ဆီလူးမထားဘူး ပေးစာနဲ့ ကျေးတမာကတော့ online ပေါ်ပျံ့ပျံ့နှံ့နှံ့တောင်ပံခတ်ခဲ့တာပဲ မနက်သစ်တိုင်းအတွက် မျက်နှာရှာမရတော့တဲ့ ငါ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာ မနေ့ကအဖြစ်အပျက်တိုင်းက ပကတိအမှန်တရားနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ရတာတွေကို သင်ခန်းစာအဖြစ်ပြဌာန်း အရေးယူပေးကြပါရဲ့ အရိမေတ္တိယျကတော့ ဒီဘ၀ဒီသံသရာအတွက် ကျနော်ဆုပန်နေဆဲဖြစ်သော ဘုရားသခင်တစ်ဆူဖြစ်လာဖို့ သေချာပါတယ် မြန်မာပြည်ကြီး democracy နဲ့ မဝေးတော့တာသေချာပါပြီလား? ကျနော်ကတော့ ခွပ်ဒေါင်းကို အကောင်းဘက်ကနေ ဘယ်ပါတီနဲ့မှမလဲပဲ မဲဆန္ဒအဖြစ်ရွေးချယ်သတ်မှတ်လိုက်ဖို့ ထပ်သေချာနေပြန်ရော.........။ ♣ kaungzawhtet>yangon> myanmar♦kzh1980@gmail.com ♣http://www.kokaungzawhtet.wordpress.com/ ♣http://www.kokaungzawhtet.blogspot.com/ ♣http://www.kzhyangon.webs.com Labels: posted by kaungzawhtet @ 12:29 PM hits(447)
♣ ထောင် ထောင် ထောင် ထောင် ကဗျာဆရာ ဆိုတဲ့ကောင် သိစေဖို့...
စိတ်ကူးသိပ် မယဉ်နဲ့ ကဗျာဆရာဆိုတဲ့ကောင် ရုပ်ရှင်ပြကွက်တစ်ခု ကို ဒါရိုက်တာနေရာကနေကြည့်ရင် အစ နဲ့အဆုံးဟာ cutting ပိုင်းတွေနဲ့ တစ်ဆက်တည်း လုပ်ထားတာကို မင်းတွေ့ရလိမ့်မယ် ၀ိုင်းစု မိုးဟေကို ၀တ်မှုန်ရွှေရည် တို့လောက်တော့ ငါဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ ဘီယာမသောက်ပဲ အနှိပ်ခိုင်းချင်နေတဲ့ကောင်ကွ အဟား အနမ်းတော့လာမပေးနဲ့ မရဘူး သူတို့ကိုမှ ငါချစ်မရတာ ငါ့ရင်ထဲမှာလည်း အဲဒီ မင်းတို့ကောင်တွေပြောပြောနေတဲ့ ဘာတဲ့ အချစ် ဆိုတဲ့အရာကြီးတော့ရှိနေပါရဲ့ ဒါကတော့ သီးသန့် (aspecial ) ငါ့ချစ်သူကောင်မလေးအတွက်ပဲထားတာလေ ဘာလဲကွာ ကဗျာရေးတာ ဘာမှမဆိုင်ဘူး အဲဒီ အရက် မိန်းမတွေနဲ့ ငါကတော့ ရင်ခုန်သံနဲ့ အချစ်ဆိုတာကို ဦးနှောက်မှာ တစ်ကန့်စီ ကန့်သတ်ထားတယ်ဟေ့ကောင် နောက်ပြီး ကဗျာကလည်း ကဗျာပါပဲ ဘာနဲ့တန်ဆာဆင်ဆင် အရေးတည်း connect ကလည်းမကောင်းဘူးဖြစ်နေသေးတယ် ပျင်းတယ်ကွာ ကဗျာဆရာဆိုတဲ့ အာချောင်ချောင်ကောင်လေးရေ နောက်ဆို ကဗျာမရေးပဲ ကောင်မလေးဆီ စာထိုင်ရေးနေတာမှ နှလုံးသားချင်း နီးနီးမှာရှိနေဦးမယ် မှတ်ချက်။ ။ စိတ်ကူးတည့်ရာ ကျနော့်မော်ဒန်ကဗျာ ဟုသာ ယူဆပါရန်။ my alls sites link url is belowhttp://www.kzhyangon.webs.com
Labels: posted by kaungzawhtet @ 02:05 AM hits(331)
မင်္ဂလာပါ...my suboo member blogger အပေါင်းတို့ နှစ်သစ် သင်္ကြန် ၂၀၁၁ မှာအပြတ်လန်းဆန်းကြပါစေလို့ ပဏာမဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့my suboo လေးတောင်ဖွင့်မရတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီနော်... အရာအားလုံးကို.... ကြိုတင်တွက်ဆသိမြင်နိုင်ခြင်း.... အသိဥာဏ်(သဗ္ဗေညုတ)ရှိနေမှတော့ဖြင့်.... ငါ.... ဘုရားဖြစ်ခဲ့ပြီပေ့ါ.... လောကရယ်.... မှတ်ချက်။ ။ ဘာသာရေး(သို့) ဒါကျနော့်မော်ဒန်ကဗျာပါ။ ယူဆချင်သလိုယူဆနိုင်ပါသည်ခင်ဗျား။ ♦ kzh1980@gmail.com yangon/myanmar ကျနော့်အရင် post များဖတ်ရန် my site link ပေးထားပါသည် member အားလုံးတို့ခင်ဗျား။ http://www.kzhyangon.webs.com Labels: posted by kaungzawhtet @ 02:02 AM hits(239)
ဒြပ်မဲ့လူ အလင်းအလျဉ်နဲ့ ငါ ပျံသန်းသွားနေရဲ့ ဒါပေမယ့် .. စကြဝဠာကြီးက ကျယ်လွန်းတော့ ဘယ်ကိုသွားသွားဘယ်ကိုမှ မရောက်ခဲ့သလိုပဲ … တစ်ယောက်ယောက်က ငါ့ကို ခူးယူနေသလိုလည်း .. .. …. …… ခံစားရတယ် အရွေ့သုညမှာ … ငါ … ကြွေကျပေးခဲ့ပါ့မယ်။ ။ တာရာမင်းဝေ ဖြစ်စဉ် တစ်ခါတလေမှာတော့လည်း တွေးကြည့်မိပါတယ် နက်ဖြန်ခါ သေသွားရင် ဘာဖြစ်မလဲလို့။ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ (မလုပ်ရသေးတာတွေလည်း အများကြီး) ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ (မဖြစ်ရသေးတာတွေလည်း အများကြီး) နက်ဖြန်ခါမှာလို့ စဉ်းစားလိုက်ပြန်တော့ နက်ဖြန်ခါတွေကလည်း အများကြီး ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘ၀မှာ နေပျော်ရတာပါပဲ ကလေးရယ်။ တာရာမင်းဝေ Labels: posted by kaungzawhtet @ 12:57 AM hits(623)
♣ ALL BLOG MEMBER FOR BLOG PAGES
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ....အင်တာနက်သုံးနေကြရတာ...ဘ၀လို့ကျနော်မဆိုလိုချင်တော့ ဘူးဗျာ... ခုတစ်လော...free blog sites လေးတွေတဖြည်းဖြည်းများလာတော့...member တွေအနေနဲ့...လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးခွင့်.. ဆွေနွေးခွင့်ရှိလာပါတယ်... ဒီနေရာမှာ...ကျနော်ပြောစရာတစ်ခုရှိနေတာတော့..................................... တစ်ချို့ sites လေးတွေက....ရေးချင်တာရေးမရသလို...ပြောချင်တာပြောမရပါဘူး.... ခုကပြောလို့ရ...ရေးလို့ရတာကများနေပါတယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးတဲ့လူများပြီး...ဒီစာတွေ...ပုံတွေ...နောက်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကလည်း... တဖြည်းဖြည်းများများလာနေတာတွေ့ရပါတယ်... လူမှုရေး...ပညာရေး..နိုင်ငံရေး...ကျန်းမာရေး...စီးပွားရေး.... အချစ်ရေး...ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ...ကဗျာ...ကာတွန်း...သုတ..ရသ... ဆောင်းပါး...သတင်းဓာတ်ပုံ...ဘာသာပြန်...မော်ဒန်....နည်းပညာ( ဒါကတော့...အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်နေပါတယ် ) ....စသည် စသည်ဖြင့်ပေါ့.... နောက်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်...ဘာမှအရေးမပါအရမအရောက်တာတွေလည်း... free site လေးတွေဖြစ်တဲ့ social network ခေါ် blog sites လေးတွေမှာတွေ့နေရပါတယ်... နောက်ပြီး...တစ်ချို့လူတွေ...ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိုပဲ.... နေ့စဉ်မှတ်တမ်းတစ်ခုလို....အင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မပါပါအောင်ရေးတင်နေ သူတွေလည်း...တပုံတပင်ပါပဲ... ကျနော်ကတော့...ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို...ခုနောက်ပိုင်း...စာမျက်နှာပေါ်သိပ်မ ဖော်ပြတော့ပါဘူး.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ...လူသားဘ၀ရဲ့နေ့စဉ်...လှုပ်ရှား...ရုန်းကန်...သွားလာ...နေ ထိုင်.... ဒီသဘောသဘာဝတရားတွေကို...အင်တာနက်ထဲမှာချည်း...ထည့်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာကို... ကျနော်တွေ့လာရပါတယ်...ပြောလေ...ရေးလေ...ဘာမှအဆန်းမဟုတ်တာတွေ... နည်းပညာတစ်ရပ်အနေနဲ့....Internet ကို...ကျနော်လေးစားနေပါတယ်ဗျာ... သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်မှုမနက်ဖြန်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကြောင်း... ♦kzh1980@gamil.com yangon/myanmar. Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:29 AM hits(281)
♣ throughout the year 2011
နှစ်သစ်... 2011 မှာ... သူငယ်ချင်းအားလုံး( online ) ပေါ်ရှိ... နှင့်အတူ... နီးနီးဝေးဝေးမှာရှိသူများ.... internet စာမျက်နှာပေါ်က...blogger များ... အားလုံး...အားလုံးသောသူများ.... စိတ်သစ်...လူသစ်...ဘ၀သစ်ဖြင့်... 2011 ရဲ့နေ့ရက်များကို... အခက်အခဲမရှိ....ဖြတ်သန်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကြောင်း.... ဆုတောင်းပေးအပ်ပါသည်.... ♦kzh1980@gmail.com yangon/myanmar. Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:45 AM hits(244)
♣ HAPPY ENDING 2010 AND STARTING 2011
၂၀၁၁ သို့ ရောက်ရှိပါတော့မည် W E A C O M E TO 2011..................သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဟုကျနော်ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်..... Calendar for year 2010 January February March SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728 SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 7: 15: 23: 30: 5: 13: 21: 28: 7: 15: 23: 29: April May June SuMoTuWeThFrSa 123456789101112131415161718192021222324252627282930 SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 123456789101112131415161718192021222324252627282930 6: 14: 21: 28: 6: 13: 20: 27: 4: 12: 19: 26: July August September SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 123456789101112131415161718192021222324252627282930 4: 11: 18: 25: 3: 9: 16: 24: 1: 8: 15: 23: 30: October November December SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 123456789101112131415161718192021222324252627282930 SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 7: 14: 22: 30: 6: 13: 21: 28: 5: 13: 21: 27: Holidays and Observances: Jan 1New Year's DayJan 18Martin Luther King DayFeb 14Valentine's DayFeb 15Presidents' DayApr 4Easter SundayMay 9Mother's DayMay 31Memorial Day Jun 20Father's DayJul 4Independence DayJul 5'Independence Day' observedSep 6Labor DayOct 11Columbus Day (Most regions)Oct 31HalloweenNov 2Election Day Nov 11Veterans DayNov 25Thanksgiving DayDec 24'Christmas Day' observedDec 24Christmas EveDec 25Christmas DayDec 31'New Year's Day' observed Add more holidays/observances: Major Christian Major Jewish Major Muslim Common observances Select: Calendar for year 2011 January February March SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728 SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 4: 12: 19: 26: 2: 11: 18: 24: 4: 12: 19: 26: April May June SuMoTuWeThFrSa 123456789101112131415161718192021222324252627282930 SuMoTuWeThFrSa12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 123456789101112131415161718192021222324252627282930 3: 11: 17: 24: 3: 10: 17: 24: 1: 8: 15: 23: July August September SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 123456789101112131415161718192021222324252627282930 1: 8: 15: 23: 30: 6: 13: 21: 28: 4: 12: 20: 27: October November December SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 SuMoTuWeThFrSa 123456789101112131415161718192021222324252627282930 SuMoTuWeThFrSa 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 3: 11: 19: 26: 2: 10: 18: 25: 2: 10: 17: 24: Holidays and Observances: Jan 1New Year's DayJan 17Martin Luther King DayFeb 14Valentine's DayFeb 21Presidents' DayApr 24Easter SundayMay 8Mother's Day May 30Memorial DayJun 19Father's DayJul 4Independence DaySep 5Labor DayOct 10Columbus Day (Most regions)Oct 31Halloween Nov 11Veterans DayNov 24Thanksgiving DayDec 24Christmas EveDec 25Christmas DayDec 26'Christmas Day' observed Add more holidays/observances: Major Christian Major Jewish Major Muslim Common observances Select: မှတ်ချက်။ ။ ဖော်ပြပါပုံအား...မြန်မာချစ်သူများဆိုဒ်မှ....ကူးယူထားပါသည်။ Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:40 AM hits(252)
♣ '' PE NYUNT WAY, BAGAN DRAWING, 2010 '' Tuesday, December 21st, 2010
'' PE NYUNT WAY, BAGAN DRAWING, 2010 '' ဖေညွှန်ဝေ (ပုဂံပန်းချီ-၂၀၁၀) NOT FOR SALE Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:09 AM hits(232)
♣ my online friends အားလုံးတို့ကို....ကြိုဆိုပါတယ်...
အခု...ပုံစံပြောင်းထားတဲ့....blog site လေးတွေရဲ့....editing နဲ့လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းလေးတွေ...တော်တော်ခြားနားကုန်ပါတယ်...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်....html ကိုသုံးလို့ရသည်ဖြစ်စေ....မရသည်ဖြစ်စေ....ကျနော်ကတော့...ရေးစရာရှိတာ....ပြောစရာရှိတာတွေပြောပြနေမှာပါပဲဗျာ....အရင်တုန်းက...ပုံစံလေးတွေကို....ကျနော်ကပိုကြိုက်နေပါတယ်...code နဲ့ links တွေလည်းထည့်ရတာလွယ်ပါတယ်....ခုပုံစံက...tool တွေများနေပြီး...ဘာမှအရာမ၀င်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတာပါ....သူငယ်ချင်းတို့လည်း...တဖြည်းဖြည်း....နားလည်လာပါလိမ့်မယ်...နောက်တစ်ခုအနေနဲ့....happy merry x' mas and new year 2011 ပါလို့....ကျနော်...ခုလောလောဆယ်...my domain free site တစ်ခုမှာ...ဘလော့ post တွေ...စုရေးပေးဖို့ရှိပါတယ်...လာလည်ပါဦး...သူငယ်ချင်းတို့ရေ....www.kzhyangon.webs.com ကိုလာခဲ့ပေါ့....လောလောဆယ်တော့...my post တွေသိပ်မတင်ရသေးပါ....
Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:26 AM hits(215)
♥ CYBER KISS....ဆိုတာ...
Netaholic (အင်တာနက်စွဲလမ်းသူ) Cyberwidows (ကွန်ပျူတာမုဆိုးမများ)...ဆိုတာဒီနေ့...ဘလော့ပေါ်မှာတွေ့ရပါတယ်.. အဟား..အဲလောက်လည်း..ကြောက်နေဖို့မလိုပါဘူးလို့ကျနော်ထင်တယ်... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်...အရာရာဟာ..လူရဲ့စိတ်အပေါ်မူတည်နေတာပါပဲ... internet မှာ communication and nformation ကအဓိကနေရာယူပါတယ်... ဒီထက်ပိုတာဘာရှိသေးလို့လဲဗျ.... နောက်တစ်ခုက..ဆက်သွယ်မှုဆိုတာကလည်း...ရှေးခေတ်ကတည်းက...လူတွေမှာရှိခဲ့တာပဲ.. ဘာနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတာမပြောပြတော့ဘူးနော်...ပိုရှည်သွားလိမ့်မယ်... နောက်ကတစ်ခုက...computer ရှေ့ဘယ်သူမှကြာကြာထိုင်မနေနိုင်တာပါပဲ... game ကစားနည်းတစ်ခုဟာ...စွဲလန်းမှုရှိစေတယ်ဆိုတာ....ကျနော်..နားလည်ပါတယ်.. ကျနော်တို့ကျေးလက်ဆိုရင်...အင်တာနက်မရှိဘူး...Ph7 မရှိဘူး....Bus Car မရှိဘူး...Air;con မရှိဘူး...Satellite လောက်တော့ရှိတယ်...Phone ရှိတယ်...ရှိတာရှိတယ်...မရှိတာမရှိဘူးပဲပြောကြရအောင်... ကျနော်...ကျေးလက်မှာ...မနေတတ်လို့...မြို့တက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး....အခုဆိုရင်မြို့နဲ့ကျေးလက်တသားတည်းနီးပါးရှိနေပါပြီ... နောက်တစ်ခုက...မရှိရင်မရှိသလို...ရှိရင်ရှိသလိုဆိုတဲ့...ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုကို...လက်ခံထားတာကြောင့်...အဲလိုကျေနပ်နေရတာပေါ့... ကျနော် gmail သုံးတယ်..face book သိပ်မကြိုက်ပါ... gtalk chat ခဏတာသုံးပါတယ်.. နောက်လေ့လာစရာရှိတာလေ့လာတယ်.. ဒါလောက်ပါပဲ...ဒီထက်ပိုပြီးကျေနပ်နှစ်သက်စရာတွေတော့...ကျနော်လည်းမတွေ့ပါဘူး... ရေးရတယ်..ပြောရတယ်...ဆိုပြီးနေရာတစ်ခုအလွယ်တကူရလာတာ...ဒီနေ့ခေတ်...အင်တာနက်မှာဖြစ်လာတာပါ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..အရာရာကို..အစွဲတလန်း..ဖြစ်နေတာဟာရောဂါလို့ဆိုလိုချင်ပါတယ်...ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ကူစားရဖို့...ကျနော်တို့စဉ်းစားအားထုတ်ကြရတော့မှာပေါ့...မဟုတ်ဘူးလား? ခေတ်အနေအထားအရ...ကြည့်..နားထောင်..ပြော..လိုက်လုပ်...ဆိုတဲ့အချက်တွေက... လူတွေကိုခိုင်းစေနေပါတယ်... ကျနော်တို့အားလုံး...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်...ခေတ်မီတိုးတက်ချင်ရင်တော့...ခုကျနော်..တစ်ခုစဉ်းစားထားတယ်...အဟား..ဒီတစ်ခါကျနော်...ခေတ်မမီသေးတဲ့ကျေးလက်တွေဆီရောက်ခဲ့ရင်...ကျနော် internet link တွေရှိတဲ့ အရာတွေကို...မသယ်သွားချင်တော့ဘူး....ဒါကြောင့်...ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ...net link နဲ့ communication တစ်ခုလုံး...တပ်ဆင်ထားလိုက်တော့မယ်လို့...စိတ်ကူးထားတယ်ဗျို့..... Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:46 AM hits(217)
♣International Disability Day( စာနာမှုနဲ့ဖေးကူပါ )...
စာနာမှုနဲ့ဖေးကူပါ... လက်...ခြေ...မျက်စိ...နား...နောက်တစ်ခုအရေးကြီးဆုံးက... လူ့ရဲ့ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်...IQ( intelligent quo ) ဆိုတာပါပဲ...ဟိုတစ်နေ့က...ကျနော်တွေ့တယ်...မသန်စွမ်ူသူများရဲ့...ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့...သင်ယူလေ့လာမှုအချို့အကြောင်းတွေကို....လေယာဉ်ပျံကို...မတီထွင်နိုင်ရင်တောင်...လေယာဉ်ကိုတော့မောင်းနိုင်ရပါမယ်...နောက်တစ်ခုက...လူဟာ...ဘယ်အရာကိုမှ...အရှုးံးပေးခြင်းမရှိသင့်ပါဘူးဆိုတဲ့...အသိတစ်ခုကျနော်ရလိုက်ပါတယ်...ကျနော်လူသားအားလုံးကို...တန်းတူညီမျှ...အစဉ်သဖြင့်သဘာထားကြည့်ရှု...ဖေးမ...ကူညီမှုအသိလည်းရှိလာရပါတယ်...လက်တွေ့ကျကျမှာတော့...ကျနော်မှာ့...ကြွယ်သချမ်းသာမှုနဲ့...ဓနအင်အားအနေနဲ့တော့...ပြည့်စုံမှုမရှိသေးပါ...နောက်တစ်ခုက...ခုဏကျနော်ပြောခဲ့တဲ့...လူရဲ့အရေးအပါဆုံးနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဆုံးအရာဟာ...ခေါင်းထဲမှာရှိနေတဲ့...အသိဥာဏ်ဆိုတာပါပဲ...ကျနော်အရာအားလုံးကိုခဏတာမေ့သွားခဲ့ဖူးတယ်...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................အဲဒီအချိန်မှာကျနော့်ရဲ့...ခေါင်း(ဦးနှောက်မှာ) ဗလာဆိုတဲ့အရာတွေဝင်လာတယ်....ကျနော်ဘာမှမသိ...မရှိတော့ဘူး....အချုပ်အနေနဲ့...ကျနော်ဆိုလိုပြောဆိုချင်တာကတော့....လူဟာ...လက်တွေ..ခြေတွေ...မျက်စိတွေ...နားတွေ...ပြည့်စုံကောင်းမွန်နေရုံလောက်နဲ့ပဲ...အရာအားလုံးကို...ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျမလုပ်နိုင်တာပါပဲ...ဒီနေရာမှာ..မသန်မစွမ်းသူတွေနဲ့ယှဉ်ပြောတော့ပါမယ်....ကိုယ်လက်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းပြည့်စုံတာ...မပြည့်စုံတာထက်...လူတွေရဲ့...ဦးနှောက်ရဲ့...အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းအသိဥာဏ်စွမ်းရည်...ဘာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်...အဓိကဇာစ်မြစ်အနေနဲ့...အရေးပါအရာရောက်နေပါကြောင်း......
Labels: posted by kaungzawhtet @ 02:04 AM hits(182)
Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:48 AM hits(288)
♦ဥုံဖွဆို...အကုန်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူး... ခုတလော...ကျနော် မြန်မာမျက်လှည့်ကြည့်ဖြစ်တယ်... နောက်...လူနေ နဲ့ သိုးဆောင်းရဲ့..အတွေးအခေါ်နဲ့ရေးတဲ့စာအုပ်လေးတွေဖတ်တယ်... ♦ကျနော်...လည်းဘ၀ဟာ..မျက်လှည့်လိုဆန်းကြယ်ပြီး...လူနေနဲ့သိုးဆောင်းလို... ဥာဏ်နဲ့သွားရတဲ့လမ်းလေးတွေကိုခရီးဆက်နေချင်တယ်... Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:38 AM hits(200)
♦ သူအို...သူနာ....သူသေ....ရဟန်း.....♣ အနိစ္စ...ဒုက္ခ....အနတ္တ.....သိဒ္ဓတ္တ..... ♠ ပြည့်စုံခြင်း....ဆိုတာတွေမရှိသေးသ၍...နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးနဲ့ကတော့...ဝေးသထက်ဝေးနေဦးမှာပဲ....အမေရေ.... Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:13 PM hits(180)
♣ html မိတ်ဆက်သင်ခန်းစာ( blog ရေးသော...သူငယ်ချင်းတိုင်းအတွက်)....3
♦ဟုတ်ကဲ့...သိပ်မရှင်းဘူးဆိုသူတွေအတွက်...ပြန်ရေးပေးပါ့မယ်.. သူငယ်ချင်းတို့... ဒီနေ့လည်း...သိပ်တော့အချိန်မရပြန်ဘူး.. ရသလောက်အချိန်ကိုပဲ...အသုံးချသွားတာပေါ့.... ♦ကျနော် ရဲ့ HTML ( background image).... နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာလေးတွေရှိသွားတာ...sorry ပါသူငယ်ချင်းတို့.. ဒါဟာ...blog site တွေအနေနဲ့...တစ်ခုခုကြောင့်မမြင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတာပါ... တကယ်တမ်းသုံးနည်းအမှန်ကိုကျနော်ပြောခဲ့တာပါပဲ... ♦ဒီနေ့တစ်ခုရှေ့ဆက်ရအောင်.... Font size and Cloor.... font size နဲ့ cloor တွေ gmail ကတိုက်ရိုက် copy မယူပဲရေးကြည့်ရအောင်...့ html code လေးတွေ htmlထဲမှာရေးပါမယ်.. rich text မှာညပန်ကြည့်ရင်းရေးသွားပါ... မခက်ပါဘူး..လွယ်ပါတယ်.. ♦ .အရောင်တွေပြောင်းကြည့်တာပါ ရတယ်နော်... အရောင်တွေပြောင်းကြည့်တာပါ ဒါက... hexcolor...လို့ခေါ်ပါတယ်.. ဒါက... hexcolor...လို့ခေါ်ပါတယ်.. ♦ ရတယ်နော်... နောက်ပြီး...font size ပြောင်းပါ့မယ်... Customize your font to achieveadesired look. Customize your font to achieveadesired look.ြ ကီးပြီးသေးထားတာ...နောက်ကစာလုံးတွေကို...ြ ကီးပြီးသေးထားတာ...နောက်ကစာလုံးတွေကို... ရတယ်နော်...မခက်ပါဘူး... ဒါကတော့...font style ပြောင်းပေးတာပါ.... This paragraph has had its font... This paragraph has had its font... ♦html table....ွှဒီနေရာမှာ...html ဟာ..table ကိုလည်းတိတိကျကျမဖော်ပြတာကို...လက်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာ... ကြည့်ပါ... AB BC CD DE AB BC CD DE Column 1 Column2Column3Row 1 Cell 1 Row 1 Cell2Row 1 Cell3Row2Cell2Row2Cell3Row3Cell 1 Column 1 Column2Column3Row 1 Cell 1 Row 1 Cell2Row 1 Cell3Row2Cell2Row2Cell3Row3Cell 1 Column 1 Column2Row 1 Cell 1 Row 1 Cell2Row2Cell 1 Row2Cell2Column 1 Column2Row 1 Cell 1 Row 1 Cell2Row2Cell 1 Row2Cell2bgcolor="rgb(0,255,0)"> Column 1 Column2Row 1 Cell 1 Row 1 Cell2Row2Cell 1 Row2Cell2Column 1 Column2Row 1 Cell 1 Row 1 Cell2Row2Cell 1 Row2Cell2♦ရတယ်နော်...သူငယ်ချင်းတို့...ကျနော်မမှားရင်တောင်...စာနဲ့ရေးပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်.. လိုအပ်ချက်ကလေးတွေရှိနေမှာပါခင်ဗျာ... သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ... Labels: posted by kaungzawhtet @ 01:34 AM hits(185)
♣ html မိတ်ဆက်သင်ခန်းစာ( blog ရေးသော...သူငယ်ချင်းတိုင်းအတွက်)...2
♦သူငယ်ချင်းတို့...connected is not fine in myanmar ဖြစ်နေတာကြောင့်ရယ်....ကျနော်လည်း...နည်းပါးလှတဲ့ online အသုံးပြုချိန်ရယ်ကြောင့်..သိပ်တော့စာအရှည်ကြိးမရေးနိုင်ပါဘူးဗျာ...ဟိုနေ့က...ပြောခဲ့တာလေးတွေ...ထပ်ဖြည့်ပြောကြတာပေါ့...ဒီနေ့...အနည်းငယ်တော့...ကျယ်ပြန့်မယ်ထင်ပါတယ်...html အသုံးချပုံလေးတွေဟာ...♦HTML( background color )....<div style="background-color: yellow; width: 200px;">ရေးချင်တာ...ဒီမှာရေးပါဗျာ.. </div>ဒီနေရာမှာ...bg color ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး...အရောင်တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောကြတာပေါ့... color ဟာ...သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့...ရိုးရိုးပဲရေးချင်ရင်...red/blue/yellow/...စသည်ဖြင့်ပေါ့... အဲဒီအရောင်တွေဖြည့်ရင်တော့...( semi column :) နဲ့အတူအရောင်ကိုရေးရပါမယ်... ဒီနေရာမှာ..multi color တွေအကြောင်းပြောပါတော့မယ်... ဥပမာ...# ( hash sign ) # 99ccff ဟာ...sky blue color ကိုကိုယ်စားပြုပါတယ်... သူကတော့...33/66/99/00(zero zero)/cc/ff စတဲ့အရောင်တွေကို...အတွဲလိုက်6ခုပေါင်းထားပြီးရေးပါမယ်.. ဥမမာ...#3366cc/#99ff00/#ccccff/#000000/33ffcc/....စသည်ဖြင့်ပေါ့... ♦ကျနော်..html color picker နဲ့ codes တွေနဲ့တွဲနေတဲ့အရောင်လေးတွေဥပမာရေးပေးခဲ့ပါ့မယ်....♦ခု bg ထဲမှာအရောင်ထည့်ပြီ်း...Insert image လေးတွေထည့်ကြည့်ရအောင်.... ဒီနေရာမှာ..html ကနေသွားမယ်ဆိုရင်...link images တွေကို...< img src;> ကနေသွားရပါ့မယ်... ကျနော်ကတော့...လွယ်လွယ်ပဲ copy paste လုပ်ထည့်ပါ့မယ်.. ♦အိုကေ...ရပြီနော်...သူငယ်ချင်းတို့... ကျနော်ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာပဲ..စာရေးခဲ့ပါမယ်... gmail ပေါ် highlight ရေးသလို...ကာဆာချပြီး...space enter နဲ့... အရောင်ကိုချဲ့ယူနိုင်ပါတယ်.. ♦နောက်နေ့မှာ..background image ပေါ်..စာရေးတာကို... ဆက်ပြောကြတာပေါ့... Labels: posted by kaungzawhtet @ 02:28 AM hits(174)
♣ html မိတ်ဆက်သင်ခန်းစာ( blog ရေးသော...သူငယ်ချင်းတိုင်းအတွက်)
♦သူငယ်ချင်းတို့...ကျနော်အချိန်မရတာကြောင့်...ဒီနေ့ blog sites လေးတွေမှာ...စာအစဥိတစိုင်ရေးနေတဲ့... friends အပေါင်းအတွက်...html ကို နားလည်အသုံးချတတ်စေရန်...ကျနော်အပိုင်းခွဲပြီး... သင်ပြပေးသွားပါ့မယ်...ဒါကိုမပြောခင်...သင်ဆရာ...မြင်ဆရာ...ကြားဆရာအပေါင်းကို...ရိုသေဂါရ၀...ပဏာမပြုလိုက်ရပါတယ်ဗျာ...♦မခက်ပါဘူး...ဒီစကားဟာ...နားလည်သူတွေမှပြောရမယ့်စကားပါ...ဒါပေမယ့်...နားလည်ဖို့တော့...ဘယ်အရာမတိုအရေးကြီးနေပါလိမ့်မယ်...♦ကဲစကြရအောင်...ကျနော်လည်း..အချိန်မရလို့...အပိုင်းခွဲပြောရမယ့်...အနေအထားပါပဲ..သူငယ်ချင်းတို့...ဆက်လက်တော့...စောင့်ဖတ်ပေးသွားစေချင်ပါတယ်...♦ခု blog sites လေးတွေမှာ..Rich text နဲ့ Html ဆိုပြီး...တွေ့ရတယ်နော်...တစ်ချို့ sites လေးတွေကတော့ပုံမပြောင်းသေးပါဘူး...တော်တော်များများပြောင်းပေးထားပါတယ်...လေ့လာပါ့မယ်...မှတ်ပါ...တွေးပါ...လက်တွေ့လိုက်လုပ်ပါ..♦လောလောဆယ်... html အကြောင်း...အရင်...လေ့လာရအောင်....အင်္ဂလိပ်လိုတွေအကုန်တော့...ကျနော်ဘာသာပြန်မပေးတော့ဘူးနော်..." HTML is notaprogramming language, but ratheramarkup language. If you already know XML, then HTML will beasnap for you to learn. We urge you not to attempt to blow through this tutorial in one sitting. We recommend that you spend 15 minutes to an houraday practicing HTML and then takeabreak, to let the information settle in. We aren't going anywhere! "♦ရတယ်နော်...သူဟာ...notaprogramming language, but ratheramarkup language ဖြစ်ပါတယ်...နောက်တစ်ခုက...သူ့မှာ tag တွေနဲ့.. attribute လေးတွေရှိနေပါ့မယ်..tag က html ကိုယ်စားပြုတဲ့ codes လေးတွေကိုခေါ်တာပါattribute ဆိုတာကတော့....tag တွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့သဘောနားလည်ပေးထားပါ...♦HTML( Backgroundcolor codes)ကဲ... blog site လေးတွေမှာ...background color နဲ့...သူငယ်ချင်းတို့...စာရေးကြည့်ရအောင်...အသုံးပြုပါမယ်...html tag ( codes ) လေးတွေကို...အားလုံးကို...blog ရဲ့ html အတွင်းမှာရေးရမှာဆိုတာ...အမြဲသတိချပ်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ပါပဲ...♦ဒီနေရာမှာ....သူငယ်ချင်းတို့နားလည်လွယ်စေရန်ပဲ...အဆင်သင့်...codes တွေယူပြီး copy လုပ်ရေးနိုင်စေဖို့ပဲ..ပထမပြောပေးသွားပါ့မယ်..နောက်မှ.. ( tag) codes တွေနဲ့..attribute တွေအကြောင်း...ဆက်ပြောကြတာပေါ့...ခုကတော့...သိပ်လွယ်လွယ်...ဘယ်သူမှနားမလည်နိုင်သေးလို့ပါပဲ....♦အခုပေးထားတဲ့ tag နဲ့ html မှာထည့်ရေးရင်...နော်ကခံ အ၀ါရောင်ရှိနေပါလိမ့်မယ်ဗျာ...<div style="background-color: yellow; width: 200px;">ရေးချင်တာ...ဒီမှာရေးပါဗျာ..</div>ရပြီနော်..သတိထားရမှာက...ကိုယ်ရေးနေတဲ့.. blog site တွေရဲ့ နောက်ခံအရောင်နဲ့..ကိုယ်သုံးတဲ့နောက်ခံအရောင်....တထပ်တည်းမကျနေစေဖို့ပါပဲ...ဒါဆိုရင်စာတွေမမြင်ရပဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်..သူငယ်ချင်းတို့ပြောင်းပေးရမှာက...html codes တွေထဲက...အရောင် (color ) ကိုပြောင်းသုံးပေးသွားပါ...အခုအထိပြောတာ...နားလည်မယ်ထင်ပါရဲ့...နောက်ပိုင်း...html ကိုသေချာပိုင်နိုင်သွားရင်...bg cloor ထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ codes လေးတွေ...ကိုယ့်ဘာကို..ရေးနိုင်လာမှာပါ...အစဆိုတာကတော့...တကယ်အခက်ဆုံးအပိုင်းကို...ကျော်လွှားနေရခြင်းလို့ပဲ..သူငယ်ချင်းတို့မှတ်ထားပါဗျာ...♦နောက်တစ်ခု....<div style="background-color: rgb(102, 204, 255); margin-right: 2em;"><p style="text-align: left;">ရေးချင်တာ...ဒီမှာရေးပါဗျာ..</p></div>ဒီ codes ခေးတွေကတော့နည်းနည်း...ပိုခက်သွားမှာပေါ့...ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့...သူဟာ... bg color codes ကို rgb နဲ့ ပြောင်းထားလို့ပါပဲ...မခက်ပါဘူး...သိရင်..သုံးတတ်ရင်လွယ်ပါတယ်... ♦သူငယ်ချင်းတို့...html စာမျက်နှာပေါ်မြင်ရမယ့်... ပုံလေးတွေ...ဥပမာပေးပြီးမပြတော့ဘူး..ကိုယ့်ဘာကို....ရေးကြည့်ပြီးမြင်ရာတာပိုကောင်းမှာပါ...ကြိုးစားကြည့်ပေါ့နော်....♦နောက်အပိုင်းတွေမှာ...html သင်ခန်းစာအကြောင်းဆက်ပို့ချပေးသွားဦးမှာပါ....သူရဲ့ link site လိပ်စာတော့...သူငယ်ချင်းတို့ကိုပေးခဲ့ပါ့မယ်ဗျာ..အရင်ကိုယ့်ဘာသာ..လေ့လာချင်သူတွေအတွက်ပါ...http://www.tizag.com မှာလေ့လညကြည့်ရှု...သင်ယူနိုင်ပါတယ်လို့....♦ html color picker and codes တွေပါ... tag (codes ) မှာ အရောင်ကို...codes (သို့) အရောင်အတိုင်းထည့်ရေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ.. နောက်ပိုင်းမှာ...ပိုနားလည်..သဘောပေါက်လာမှာပါ... #FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00 #FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00 #FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900 #FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600 #FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300 #FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000 #CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00 #CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00 #CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900 #CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600 #CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300 #CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000 #99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00 #99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00 #9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900 #9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600 #9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300 #9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000 #66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00 #66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00 #6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900 #6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666000 #6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300 #6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000 #33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00 #33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00 #33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00 #3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900 #3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600 #3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300 #3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000 #00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00 #00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00 #0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900 #0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600 #0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300 #0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000 ♦ နောက်အပိုင်းများတွင်...html သင်ခန်းစာမှာ...ဒီထက်မခက်ရင်တောင်.. ဒီထက်မလွယ်ကူနိုင်ကြောင်း...သိလာပါလိမ့်မယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်...စိတ်တော့မလျှော့လိုက်နဲ့...သူငယ်ချင်းတို့ရေ....
Labels: posted by kaungzawhtet @ 03:01 AM hits(179)
♦Gmail Posting လေးတွေကို...Highlight ပေး Color ရေးအလှဆင်ချယ်သကြမယ်...
သူငယ်ချင်းအားလုံးအတွက်...ဒီနေ့...ကျနော့်ရဲ့ gmail posting လေးတွေအပေါ်...highlight or text color များပြောင်းလဲပြီး...စက္ကူတစ်ရွက်လိုဖန်တီးမှုတွေအကြောင်း....ပြောပြဆွေးနွေးသွားပါမယ်...(မှတ်ချက်။ ။ဒါဟာ...html သင်ခန်းစာမဟုတ်ပါ...နောက်တစ်ခုက...html ဟာလည်း... blog များရေးသားခြင်း...နောက် programming ဘာသာရပ်တို့ရဲ့...အခြေခံတစ်ခုဆိုတာကိုတော့...နောက်အလျဉ်းသင့်...ကျနော့်ရေးသားချက်တွေမှာ...ဆက်ဖော်ပြပေးသွားဦးမှာပါလို့... 1. စတင်လုပ်ဆောင်ပါတော့မယ်... 2.gmail ဟာ compose လုပ်မယ်ဆိုရင်...အပေါ်မှာ...tool bar ပေါ်က tools လေးတွေ...တန်းစီရှိနေပါလိမ့်မယ်... Bulleted List ကိုရွေးပါမယ်... 3.၅ခုလောက်...အစဉ်အတိုင်းရွေးပြီး...ရေးထားပါ့မယ်...(မှတ်ချက်။ ။ Space ခြားပြီးEnter နဲ့ ၅ခုလောက်အောက်ကို စဉ်ရေးပါ့မယ်... 4.Select လုပ်ပါ့မယ်...အပေါ်ကနေ...အောက်ကို ( Select ) ယူပါ့မယ်.... 5.Highlight Colour ပေးပါ...ကြိုက်တဲ့အရောင်... 6. ဒီအတိုင်း...လှပတဲ့...Highlight ပေး...အရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့...Body တစ်ခုကို..ရပါပြီဗျာ... မှတ်ချက်။ ။html မှာ...ဒီလိုရေးမရပါ... 7.နောက်ကတစ်ဆင့်...မြင့်ကြည့်ပါ့မယ်... ဘေးမှာရှိနေတဲ့...Bulleted List လေးတွေဟာ...ခုအနေအထားတိုင်းဆိုရင်... စာရွက်တရွက်ပုံဖြစ်ပြီး...ဘေးမှာအပေါက်လေးတွေ...တန်းစီနေသလို...လှနေတယ်နော်... 8.Bulleted List လေးတွေကို...Select အောက်ကနေအပေးပေးပြီး...Text Color မှာ...အဖြူရောင်ပေးကြည့်ပါ... ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ? 9. ဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျ... 10.နောက်တစ်ဆင့်...လုပ်ပါဦးမယ်... အောက်ခြေမှာကျန်နေတဲ့....Bulleted List လေးတစ်ခုကို Select လုပ်ပြီး...Delete လုပ်ပစ်လိုက်ပါ... ( Delete နှစ်ခါလုပ်ပေးတာပိုသေချာပါတယ်...) ဒီလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်... 11.ကဲ...ရပြီနော်...သူငယ်ချင်းတို့... ဒီလိုဖန်တီးပြီး...လှနေတဲ့... Highlight Body တစ်ခုလုံးကို...စိတ်ကြိုက်...အကျယ်ချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့... Space + Enter ( Key ) နဲ့...ကြိုက်သလိုချဲ့ပြီး...စာရွက်ပုံအရှည်ကြီး...ဖန်တီးနိုင်ပါပြီဗျာ... 12. နောက်တစ်ခု....အဲဒီ Tool Bar လေးမှာ...လူမျက်နှာပုံလေးတွေ...မိုးရွာ...နေပူ...နောက်ပြီး.... Flash လှိုင်းလေးတွေနဲ့...Animated ပုံရိပ်တွေကို...ကိုယ့်ဖာသာ...လှအောင်ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်... 13.ကြည့်ပါဦး....ကျနော်ဖန်တီးထားတဲ့...ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုပေးတဲ့စာ.... (မှတ်ချက်။ ။ဒါတစ်ခုလုံးကို blog sites လေးတွေမှာ ....copy and paste လုပ်ရင်..... ဘေးက...Bulleted List လေးတွေ...မြင်ရနိုင်ပါတယ်... ဒါက...html နဲ့မဆိုင်တဲ့အတွက်... blog sites တွေပေါ်....ဒီအတိုင်းသွားမတင်သင့်ပါဘူး...( .Bulleted List လေးတွေ...မပါတော့ဘူးလို့ပြောထားတဲ့...ပုံတွေမှာ...ပါနေတာ... ကျနော် html နဲ့သေသေချာချာ...ရေးမထားလို့ပါ...မပါဘူးလို့...သဘောထားကြည့်ရှုပေးပါ) ချစ်သူပျော်ရွှင်ခြင်း...စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်း...မနက်ဖြန်တိုင်းမှာ...အနာဂါတ်နေ့ရက်များကို...အခက်အခဲမရှိ...အောင်မြင်စွာ...ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့... 14. ဘယ့်နှယ်လဲဗျ...သဘောကျရဲ့လား? အဟား...ကျနော်လည်း...သိပ်သိလှတတ်လှတော့....မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ... သူငယ်ချင်းတွေအားလုံး...gmail post လှလှလေးတွေနဲ့...အချင်းချင်းပေးပို့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့... မှတ်ချက်။ ။ Highlight ပေးထားတဲ့အပိုင်းမှာ...မလိုချင်တာတွေ...Select လုပ် Delete လုပ်ပစ်ပါ... .Bulleted List လေးတွေကိုလည်း...ဒီလိုပဲကြည့်ကောင်းအောင်ဖြတ်ထုတ်ပါ... လိုချင်တဲ့ပုံ...စာတွေကြိုက်သလို ( Copy and Paste ) နည်အတိုင်း..အရောင်ပြောင်း...အလှဆင်ချယ်သပါ... Okay နော်...နောက်တစ်ပါတ်...html နဲ့..body and text color တစ်ခုလုံးပြောင်းတာတွေ... font size တွေအကြောင်း...ဆက်ရေးကြတာပေါ့ဗျာ... * Okay နော်...မပြည့်စုံမှုနဲ့လိုအပိချက်တစ်ချို့ကို...ဖြည့်စွက်ဖတ်ပေးပါလို့... Labels: ♦Kaungzawhtet.Yangon.Myanmar.	posted by kaungzawhtet @ 01:17 AM hits(205)
''တစ်ခွန်းစကား '' ရနံကိုတော့ရတယ် ဒါပေမယ့်....ငါ့ကိုမွှေးတာမဟုတ်ဘူး ။ ဒီတောအုပ်ဒီကျောက်သားက ရင်အုံ့မောက်မောက်နဲ့ပြားနေလိုက်တာ ။ ဘာဖြစ်လဲ ငါဟာ....သိန်းငှက်တစ်ကောင် ကိုယ့်လေးညှို့ကိုယ်ဆွဲပြီးထွက်ခဲ့တယ်...။ တာရာမင်းဝေ Labels: ♥kzh/yangon/myanmar.	posted by kaungzawhtet @ 02:04 AM hits(205)
♥Romantic Love Quotes
The most precious possession that ever comes toaman in this world isawoman's heart. ~ by Josiah G. Holland ~ What we need to know about loving is no great mystery. We all know what constitutes loving behavior; we need but act upon it, not continually question it. Over-analysis often confuses the issue and in the end brings us no closer to insight. We sometimes become too busy classifying, separating, and examining, to remember that love is easy. It's we who make it complicated. ~ by Leo Buscaglia ~ Romantic love reaches out in little ways, showing attention and admiration. Romantic love remembers what pleasesawoman, what excites her, and what surprises her. Its actions whisper: you are the most special person in my life. ~ by Charles Stanley ( A Man's Touch) ~ From every human being there risesalight that reaches straight to heaven. And when two souls that are destined to be together find each other, their streams of light flow together, andasingle brighter light goes forth from their united being. ~ by Unknown ~ It is the things in common that make relationships enjoyable, but it is the little differences that make them interesting. ~ by Todd Ruthman ~ Love is always open arms. If you close your arms about love you will find that you are left holding only yourself. ~ by Leo Buscaglia ~ My heart to you is given: Oh, do give yours to me; We'll lock them up together, And throw away the key. ~ by Frederick Saunders ~ The heart is the place where we live our passions. It is frail and easily broken, but wonderfully resilient. There is no point in trying to deceive the heart. It depends upon our honesty for its survival. ~ by Leo Buscaglia (Born For Love) ~ There is only one happiness in life: to love and be loved. ~ by George Sand ~ Love is an act of endless forgiveness A tender look which becomesahabit. ~ by Peter Ustinov ~ Labels: ♥kaungzawhtet/yangon/myanmar	posted by kaungzawhtet @ 01:59 AM hits(317)
(၁) မြူပြာတွေနဲ့ သာယာနေတဲ့ နံနက်ခင်းပါပဲ။ မြို့အ၀င်လမ်းလေးမှာ စကြာပန်းတွေလည်း ၀င်းဝင်းဝေေ၀ ပွင့်နေကြလေရဲ့။ လယ်ကွင်းတွေဆီက စီးမျောလာတဲ့ လေသုန်လေညင်းကလည်း ရိုးပြတ်ရနံ့သင်းနေတယ်။ မြို့သူမြို့သားတွေအားလုံး ဘုရားဝတ်ပြုလို့ပြီးခါစအချိန်ပေါ့။ ချိုလွင်တဲ့ ခေါင်းလောင်းသံတွေက မြို့ကလေးရဲ့နံရံမှာ ဘောင်ဘင်ရိုက်ခတ်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ ဒီမြို့ကလေးကို ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ နီမှောင်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ်။ (ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ) လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ အနောက်တောင်တန်းက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို တိုးတိုးညည်းဆိုလာပါတယ်။ သူ့ကို အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်မိရင်း မြို့သူမြို့သားတွေ မျက်မှောင်ကြုတ်သွားတယ်။ သေသေချာချာထပ်ကြည့်ပြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါရယ်လို့ မှတ်မိလိုက်တဲ့အခါ သူတို့မျက်နှာတွေ သွေးဆုတ်ဖြူရော်သွားတယ်။ ကသုတ်ကရုတ်နဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ယိုင်ထွက်ပြီး လူငယ်နဲ့ ဝေးရာကိုရှောင်ကြတယ်။ မကြာမီမှာပဲ 'ဒီမွန်းပြန်လာပြီ' ဆိုတဲ့ သတင်းဟာ တစ်မြို့လုံးကို ပျံ့နှံ့သွားပါတော့တယ်။ အဲဒီသတင်းကြောင့် မြို့လေးဟာ တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်သွားတယ်။ ကန်းနေတဲ့မျက်လုံးကို စောင့်ရှောက်အုပ်မိုးပေးနေရတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးကားကားကြီးလို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ငိုက်တွဲကျသွားပါတယ်။ အဲဒီတစ်နေ့လုံးမှာ မြို့သူမြို့သားတွေဟာ တီးတိုးစကားကို အသံပြာအောင် ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ညဘက်ရောက်တော့ အိမ်တံခါးတွေလုံအောင်ပိတ်ပြီး စောစောအိပ်ရာဝင်ကြတယ်။ သူတို့တွေဟာ အဲဒီလောက်အထိ ဒီမွန်းကို ရွံရှာကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ ဒီမွန်းဟာ ဒီနယ်တစ်လွှားမှာ ပြိုင်ဘက်မရှိခဲ့တဲ့ လူမိုက်ကလေးပါ။ (ဘယ်လောက်မိုက်ခဲ့တယ်၊ သူတို့တွေ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကြောက်ကြတယ်၊ အခုသူ ဘယ်ကပြန်လာတယ်ဆိုတာတွေကတော့ ထားလိုက်ပါတော့) ဒီမွန်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ အနီးအပါးမြို့ရွာက လူမိုက်ကြီးတွေ၊ လူမိုက်လေးတွေ တဖွဲဖွဲလာရောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ ဒီမွန်းကို သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် တညီတညွတ်တည်း တင်မြှောက်ထားလိုက်တော့တယ်။ မြို့ကလေးကတော့ ဒီမွန်းပြန်ရောက်လာတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လည်ချောင်းထဲမှာ ပင့်ကူတစ်ကောင် အိမ်ဖွဲ့လာသလို ခံစားရတယ်။ အသက်ရှူရတာလည်း လေထဲမှာ သဲတရှပ်ရှပ်ပါလာသလိုပဲတဲ့။ လူကြီးအချို့ဟာ အိမ်ရှေ့ခန်းမှာထိုင်ပြီး ဆောင်းရာသီ ယပ်တောင်ကြီးတွေကို တဖျပ်ဖျပ်ခတ်နေကြတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီမွန်းပြန်ရောက်တာ နေ့ရက်တွေအတော်ကြာလာပါတော့တယ်။ (၂) ဒီမွန်းက သိပ်တည်ငြိမ်တယ်။ သူ ပြောဆိုနေထိုင်ပုံကို လေ့လာရင် အတွေ့အကြုံသိပ်များခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်မှန်း သိသာတယ်။ ဘာသာစကားလည်း သုံးလေးမျိုးတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ သူစကားပြောရင် ဘေးလူတွေ အလေးထားနားထောင်နေရတယ်။ ဖရီးမေဆင်ဂိုဏ်းအကြောင်းလည်းပါတယ်။ ဆာမှုရိုင်းယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းလည်းပါတယ်။ စုံလို့ပါပဲလေ။ သေချာတာကတော့ ဒီမွန်းကို လိုလားသူကရော မလိုလားသူကပါ အတိုင်းအတာ ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုထားပြီး သူ့ကို 'ဖြုံ' ရတယ်။ သူ့အယူအဆကလေးတွေကလည်း တစ်မျိုးပဲ။ တစ်ခါက သူပြောဖူးတယ်။ "ကျုပ် ကြေးစားမိန်းမပျက်လေးတွေကို သနားတယ်" "ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုဒီမွန်းရဲ့" "မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးက 'အပျိုရည်' နဲ့ အဲဒါကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ 'ဣနြေ္ဒ' ပဲဗျ။ မပြေလည်တဲ့စားဝတ်နေမှုကြောင့် သူ့ရဲ့ အပျိုရည်ကို ရောင်းကုန်တစ်ခုလို ဈေးကွက်တင်ခဲ့ရတဲ့ ဒီလိုမိန်းကလေးတွေကို ကျုပ်သနားတယ်" "သြော်" "စားပွဲပေါ်မှာထိုင်၊ ပန်ကာအောက်မှာထိုင်၊ ကောင်တာနောက်မှာ ထိုင်ပြီး လူတွေကို ညှစ်ထုတ်ခေါင်းပုံဖြတ်နေတဲ့ မိန်းမမျိုးနဲ့စာရင် သူခန္ဓာသူရောင်းပြီး ရပ်တည်စားသောက်ရတဲ့ အဲဒီမိန်းကလေးမျိုးကို ကျုပ်သိပ်လေးစားတယ်" ဒီမွန်းဟာ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းစာထူးချွန်ခဲ့တဲ့ လူငယ်တစ်ဦးပဲ။ နောက်ပိုင်းမှာ ကျောင်းဆက်မတတ်တော့ပေမယ့် တက်ခဲ့စဉ်က 'လူရည်ချွန်ဆု' နှစ်ခါရဖူးတယ်။ အဲဒါကြောင့် သူ့ရဲ့အခြွေအရံတွေက တစ်ခါကျရင် 'ကျောင်းကိုမလွမ်းဘူးလား' လို့မေးတယ်။ သူက ခေါင်းခါတယ်။ "ပညာတွေလဲ သိပ်မတတ်ချင်ပါဘူးဗျာ။ လွမ်းစရာသိပ်များတဲ့ လောကကြီးမှာ ပညာနဲ့လွမ်းရတာ အနာဆုံးပဲ" "ဘာကိုဆိုလိုတာတုန်းဗျ" "သြော် ... မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်တာကိုမြင်ရင် ဖြစ်သင့်တာက တစ်မျိုးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ နှမြောနာကျင်ရတာ ပညာတတ်တွေရဲ့ ၀ဋ်ဒုက္ခပဲလေ" "သြော် ... သြော်" မြို့ထဲက အဆီပြန်မျက်နှာနဲ့ ရှေ့နေ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်ကြီးကိုဆိုရင် ဒီမွန်းက သိပ်ကြည့်မရပါဘူး။ (အန္တရယ်တော့လည်း မပေးပါဘူး) အဲဒီရှေ့နေကြီးကိုတွေ့ရင် သူ့လူတွေကို မေးငေါ့ပြတယ်။ "အဲဒါ နိရှေးရဲ့ အန်သိုလိုဂျီကျမ်းကြီးပေါ့" သူ့လူတွေက ဘယ်နားလည်ပါ့မလဲ။ သူက ရှင်းပြတယ်။ "ဟစ်တလာက မူဆိုလီနီကို မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ကျမ်းကြီးလေ ... ခင်ဗျားဖတ်မလား" "ဟာ .. မဖတ်ချင်ပါဘူး" "အေး .. အဲဒါဆို အဲဒီလူကြီးကိုလဲ မကြည့်နဲ့၊ လာ ကျုပ်တို့မျက်နှာလွှဲထားရအောင်" ဒီမွန်းက အဲဒီလို လူမိုက်မျိုး၊ နည်းနည်းတော့ 'အံ့' လောက်ပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ မြို့ကလေးရဲ့ နာရီစင်အောက်မှာ သူတို့အုပ်စုလက်ဖက်ရည်ထိုင်သောက်နေတုန်း ကျူရှင်တစ်ခုက ကျောင်းသူလေးတွေ ဆင်းလာတယ်။ အဲဒီကျောင်းသူတွေထဲကတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်တာမှာ ဒီမွန်းရဲ့ မျက်လုံးတွေ ၀ိုင်းစက်ပျော့ပျောင်းသွားပါတယ်။ "ဟမ်းလော့" "မဟုတ်ဘူး .. သူ့နာမည် ဟမ်းလော့မဟုတ်ဘူး" "ဟမ်းလော့ (Hemlock)ဆိုတာ ပန်းဖြူတွေပွင့်တဲ့ အပင်တစ်မျိုးကိုပြောတာ။ သူ့နာမည် ဘယ်သူလဲတော့ ကျုပ်မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်အတွက်တော့ သူဟာ ဟမ်းလော့ပဲ။ ကျုပ် သူ့ကို ..." အားလုံး အံ့သြသွားကြတယ်။ ဒီမွန်းရဲ့ သတ္တုရင်ခွင်ထဲမှာ အချစ်ဆိုတဲ့ပန်းလေးဟာ မွှေးအောင်ဘယ်လိုပွင့်သွားသလဲ။ တကယ်တော့ အဲဒီနေ့ဟာ ဘာမှမဆန်းပြားလှပါဘူး။ သာမန်နေရောင်ခြည်တွေနဲ့ တောက်လောင်နေတဲ့ နေ့ပါပဲ။ လေထဲမှာ ငှက်ကလေးတွေ ကူးခတ်ပြီး ရေထဲမှာ ငါးတွေပျံသန်းနေကြတာလည်း အရင်အတိုင်းပါပဲ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ အပြန်လမ်းမှာ ဒီမွန်းတစ်ယောက်တည်း ခေါင်းငုံ့လျှောက်လှမ်းရင်း အတွေးတွေ ဝေနေခဲ့တော့တယ်။ (၃) အဲဒီလိုနဲ့ ဒီမွန်းရဲ့ လူငယ်ညတွေမှာ လရောင်ဖြူတွေက လေတိုက်တိုင်း၊ တဖျပ်ဖျပ်လွင့်ခတ်နေကြတယ်။ တစ်ညမှာ တစ်ကြိမ်သာမြင်ခွင့်ရှိတဲ့ 'လထွက်ချိန်' ကို ငြိမ်သက်ပြီး သူ စောင့်ငေးခဲ့ပြီ။ သစ်ခြောက်ပင်ကြီးပေါ်မှာ နှင်းခါးတွေ အုံ့အုံ့မှိုင်းမှိုင်းဝေတာကိုလည်း လမ်းပေါ်ကနေ သူရပ်ကြည့်နေတတ်ပြီ။ အိပ်ပျော်ချိန်မှာလည်း ပန်းဖြူတစ်ပွင့်ပန်ထားတဲ့ ရိုမန်တစ် အိပ်မက်တချို့ကိုပဲ ဌာန်ကုန်အောင် သူ မက်ခဲ့မိပေါ့။ ဟမ်းလော့ကို သူစွဲလမ်းမိတဲ့ကိစ္စက သိပ်တော့ အဆင်မသင့်လှပါဘူး။ ဟမ်းလော့ဟာ ဒီမြို့ရဲ့ အလှဆုံးမိန်းကလေးတွေထဲမှာ ပါပါတယ်။ မိဘတွေကလည်း ငွေကြေးချမ်းသာပြီး အလိုလိုက်ကြလို့ သူမဟာ ပေါ့ပေါ့တန်တန် ကြီးပြင်းလာတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတော့ မျက်နှာများပြီး ရည်းစားများတယ်။ လမ်းဘေးအုတ်ခုံမှာထိုင်တဲ့ လူငယ်လေးတွေက သူ့ကို အသည်းခွဲဘုရင်မလို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပေါ့။ သူမကို ဒီမွန်း စွဲလန်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကလည်း ပျံ့ထွက်လာရော သူမတို့ မိသားစုဟာ တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားပါတယ်။ ဒီမွန်း အန္တရာယ်ပေးမှာ တစ်စုံတစ်ရာ တောင်းဆိုမှာတွေကို သူတို့ စိုးရိမ်ကြတယ်။ ဒီမြို့ကို စွန့်ခွာထွက်သွားဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်ကူလို့ တစ်နေ့နေ့မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပဲ တထိတ်ထိတ်နဲ့ စောင့်နေကြရတယ်ပေါ့။ ဟမ်းလော့ဘက်ကလည်း ဂုဏ်တက်သွားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သူမလိုလှတဲ့ တခြားမိန်းကလေးတွေလည်း ရှိသေးရက်နဲ့ သူမကိုမှ ဒီမွန်းက တွယ်ငြိသွားရခြင်း၊ ဒီမွန်းလို စက်ရုပ်လူတစ်ယောက်ကို ရင်ခုန်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းတွေဟာ သူမတို့ မိန်းကလေးတွေကြားမှာတော့ ဟမ်းလော့ ခေါင်းမော့စရာပါပဲ။ အနေဝေးသူတွေအတွက် ဒီမွန်းက ခန့်မှန်းရခက်တယ်။ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က ထွက်လာတာသာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒီသတင်းဟာ ယုံချင်စရာမကောင်းဘူး။ ဒီမွန်းက တည်တည်ကြည်ကြည်ပါပဲ။ ဟမ်းလော့အပေါ် နူးညံ့သိမ်မွေ့နေတာကလွဲလို့ တခြားဘာအရိပ်အခြည်ကိုမှ မပြပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဟမ်းလော့တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပိုပြီးစိုးရိမ်လာကြတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူတို့က 'နတ်ပွဲ' တစ်ခု ကျင်းပပါလေရော။ နတ်ပွဲလုပ်ရတာကတော့ သူတို့ရဲ့သမီးလေးမှာ ကြုံရမယ့် အနှောင့်အယှက်တွေကို နတ်ကတစ်ဆင့် တားဆီးကြည့်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပွဲကို ဒီမွန်းက လာကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ... "ဟေ့လူ ... လာဦး" နတ်ဝင်သည်ကို သူ့ဆီခေါ်တယ်။ နတ်ဝင်သည်က ကြောက်နေတယ်။ (နတ်ဝင်သည်မှမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီအချိန်မှာ အားလုံးကြောက်နေပြီ) "ခင်ဗျားကို မြှားနတ်မောင် ၀င်ပူးအောင် လုပ်စမ်းပါ။ နေဦး မြှားနတ်မောင်နဲ့ ဖူးစာရေးနတ်ဆိုတာ အတူတူပဲလား။" "အဲ .. ကျွန် .. ကျွန်တော် မသိ ..." "ခင်ဗျားနတ် 'က' စားနေပြီး မသိဘူးလား။ ကဲ .. ထားပါတော့။ တူတူ မတူတူ ၀င်ပူးအောင်လုပ်စမ်း" "အဲ့ .. အဲဒီနတ်က တကယ်ရှိလို့လား" "ဟင် ... ခင်ဗျားက ကျုပ်ကို ပြန်မေးနေတယ်။ ကျုပ်က ဘယ်သိမှာလဲ။ ကဲ အဲဒီနတ်တွေ မသေချာရင် 'ကျူးပစ်' ၀င်ပူးစမ်း။ ကျူးပစ်ဆိုတာ အချစ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ရောမက နတ်ပဲ" "ရ ... ရမှာ မဟုတ်ဘူးဆရာ။ ဒါ ... ဒါက ရောမမှ မဟုတ်ဘဲ မလွယ် ... " ဒီမွန်းက စိုက်ကြည့်တော့ နတ်ဝင်သည် ကြောက်ဒူးတုန်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမွန်းက ဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ ဘွိုင်းဂျော့ရဲ့ သီချင်းအလိုက်အတိုင်း လေချွန်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး လှည့်ပြန်သွားတယ်။ ညနေကျတော့ မြို့ပြင်က ပိတောက်ပင်ကြီးအောက်မှာ သူတစ်ယောက်တည်း ဂစ်တာကြိုးတပ်နေတယ်တဲ့။ သူ့ကိုလည်း သတိပေးသူက ပေးပါတယ်။ "ဟမ်းလော့တို့မိသားစုက အစ်ကို့ကို မလိုလားကြဘူး အစ်ကို" "အဟင်း .. ဟမ်းလော့ကိုယ်တိုင်ကရော" "အဲဒါတော့ မသိဘူး အစ်ကို။ ဒါပေမယ့် သူက ယောက်ျားလေးတွေကို ကစားတတ်၊ ပညာပြတတ်တယ်" "ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့လေ။ ဟမ်းလော့ဆိုတာကိုက အဆိပ်ပင်တစ်မျိုးပဲဟာ" "ဟင် ... ပန်းဖြူပွင့်တဲ့ အပင်ဆို" "အေးလေ ... ပန်းဖြူပွင့်တဲ့ အဆိပ်ပင်" အဲဒီလိုနဲ့ ရာသီဥတုသာယာတဲ့တစ်နေ့မှာ ဒီမွန်းက ဟမ်းလော့ကို စကားတစ်ခွန်းပြောပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ မင်းကို ချစ်တယ်တဲ့။ (၄) "တစ်ခါတည်း အဖြေမတောင်းဘူးလား" လို့ ဒီမွန်းကို ၀ိုင်းမေးကြတယ်။ ဒီမွန်းက ဘာမှပြန်မပြောဘူး။ မေးလွန်းမက မေးကြတဲ့အခါမှာ သူက လက်ဖက်ရည်စားပွဲပေါ်မှာ မြေဖြူနဲ့ ရေးလိုက်တယ်။ "ငပေ၊ ငမှေး၊ မို့ ... အဖြေကလေး ပေးပါကွယ်" တဲ့။ ပထမတော့ အားလုံးကြောင်သွားပြီး နောက်မှ ရယ်လိုက်ကြတာ သောသောညံလို့ပေါ့။ "ကိုဒီမွန်းက ကဗျာလဲရေးတတ်တာကိုး။ သိပ်မိပဲဗျာ" လို့ ၀ိုင်းပြောကြတယ်။ ဒီမွန်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အေးတိအေးစက်ကြီးပါပဲ။ ဟမ်းလော့က ဒီမွန်းကို ပြောပါတယ်။ သူ့ကိုချစ်ရင် စာမေးပွဲတစ်ခု အောင်အောင်ဖြေပေးပါတဲ့။ ဟမ်းလော့ပြောတဲ့ စာမေးပွဲက အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ စာမေးပွဲပါပဲ။ သက်ဆိုင်ရာ ပညာသည်တွေအတွက်တောင် အသက်ရှူမှားရတဲ့ စာမေးပွဲဟာ ဒီမွန်းလိုလူတစ်ယောက်အတွက် တွေးဝံ့စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အံ့သြလောက်အောင်ကို တောင်းဆိုသူက တောင်းဆိုပြီး ခေါင်းညိတ်တဲ့သူက ခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီစာမေးပွဲကို ဒီမွန်းဖြေမယ်တဲ့။ (အဲဒီစာမေးပွဲဟာ နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံကြီးမှူးတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စာမေးပွဲတစ်ခုပါ) ဟမ်းလော့ကို သူတစ်ခွန်းပြောခဲ့တယ်။ "ကိုယ့်သဘာဝအရတော့ ဒါတွေကို စိတ်မ၀င်စားတော့ပါဘူး။ နိမ့်ပြ၊ မြင့်ပြ၊ ဆုတ်ပြ၊ ဆန်းပြနဲ့ မင်းရှေ့မှာ ဂဏန်းတွေ တစ်လုံးပြီးတစ်လုံး ဖြစ်ပြနေတဲ့ လူတွေထဲမှာလည်း ကိုယ်မပါချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မင်းတောင်းဆိုလို့ ကိုယ် ကြိုးစားမယ်။ ကိုယ်က လူမိုက်ပါ။ လူမိုက်အတိုင်းအတာအထိပဲ စွမ်းနိုင်လိမ့်မယ်။ ကြယ်တံခွန်ကို ကိုယ်မဆွတ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လူမိုက်ဟာ လူမိုက်လိုတွေးတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က 'လူတံခွန်' ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်။ အဲဒီတော့ မင်းစောင့်နေလေ။ အဲဒီစာမေးပွဲကို ကိုယ် အောင် အောင်ဖြေပြီး မင်းဆီ ကိုယ်ပြန်လာခဲ့မယ်။" အဲဒီလိုနဲ့ ဒီမွန်းဟာ ကျောင်းတော်သားတစ်ယောက်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကျောင်းက ခေါင်းလောင်းမထိုးဘူး။ သူကလည်း ဖောင်တိန်၊ စာရွက်၊ ဖတ်စာအုပ် စတာတွေ ဘာမှမဆောင်ဘူး။ သူဖြေဆိုရမယ့် ဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြို့ပြင်က ကျောင်းဆရာကြီးတစ်ယောက်ထံမှာ (SYMPOSIUM) ဆိုတဲ့ စနစ်နဲ့ သင်ယူပါတယ်။ သူနဲ့ ဆရာကြီးဟာ အရိပ်ကောင်းတဲ့ သစ်ပင်အောက်မှာ ထိုင်တယ်။ မြေပြင်မှာ တုတ်နဲ့ခြစ်ပြီး အပြန်အလှန်ပြောဆို ဆွေးနွေးကြတယ်။ ပြန်လည်ငြင်းခုံခွင့်ရော၊ နည်းလမ်းဆန်းသစ်ခွင့်ရော သူရတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဒီပညာကို လေ့လာခဲ့တယ်။ (ဆရာကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်သူဟာလည်း ဒီဘာသာရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျမ်းပြုစာတမ်းတစ်စောင် ရေးသားခဲ့ဖူးတယ်။ အစပိုင်းမှာပဲ ဆရာကြီးက သင်ပေးနိုင်ပြီး နောက်ပိုင်း သူ့ ကျန်းမားရေးမကောင်းတဲ့အခါ သင်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ ဆရာကြီးကိုယ်စား သူ့သမီးက ဆက်လက်သင်ပြပေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမွန်းကတော့ ကြိုးစားပါတယ်။) မီးခိုးငွေ့တန်းကို ကြိုးကွင်းနဲ့ ပစ်ဖမ်းတာကမှ လွယ်ဦးမယ်။ ဒီစာမေးပွဲကို အောင်မြင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီမွန်းကတော့ တိုက်ပွဲဝင်သွားပါပြီ။ စစ်ရထားပေါ်ကနေ အားလုံးကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ထားပါပြီ။ မြို့ပတ်လမ်းမှာ၊ သင်္ဘောဆိပ်မှာ၊ မြင်းလှည်းပေါ်မှာ၊ ပန်းခြံထဲမှာ ကျောင်းစာတွေ လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတဲ့ ဒီမွန်းကို အားလုံးတွေ့ကြရတယ်။ (အားလုံးကလည်း မသိမသာ အကဲခတ်နေကြတယ်) အဲဒါကို ဟမ်းလော့နဲပ အပေါင်းအပါတွေက မသိမသာ မျက်စပစ်တယ်။ ဒီမွန်းရှေ့မှာ ဘာသံမှ မထွက်ရဲပေမယ့် ကွယ်ရာမှာတော့ ဒီမွန်းကို ငပေါတစ်ယောက်လို ဟားကြတယ်။ ဒီမွန်းလိုကောင်ကို ၀ပ်သွားအောင် ပြုစားလိုက်နိုင်တဲ့ ဟမ်းလော့ရဲ့ နားထဲကိုလည်း ချီးကျူးစကားတွေ အများကြီးရောက်လာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ သူမတို့အတွက် ပျော်စရာဆိုတာ ဒီမွန်းကို ကျိတ်ရယ်နေကြခြင်းပါပဲ။ အဲဒါတွေအားလုံးကို ဒီမွန်း ပြန်ကြားပါတယ်။ သူ့ဆီကိုလည်း စာတစ်စောင် ရောက်လာတယ်။ ဟမ်းလော့ကို ဒီမွန်းထက်အရင်ချစ်ခဲ့ပြီး ဒီမွန်းကြောင့် နောက်ဆုတ်ပေးရတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဆီကပါ။ ဟမ်းလော့ကို သူသိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာကို နာမည်မဖော်ဘဲ ကြေကြေကွဲကွဲ ရေးထားတာပါ။ ဒီမွန်းကတော့ ဘာကိုမှ မခံစားရသလိုပါပဲ၊ သူ့ကျောင်းစာကိုပဲ သူလေ့လာပြီး နောက်ဆုံးတော့ သံရုံးမှာ ဖြေဆိုဖြစ်တယ်။ စာမေးပွဲအကြောင်း ဘာမှပြန်မပြောဘဲ မြို့မှာ ပုံမှန်ပြန်နေတယ်။ သူ့ ထုံးစံအတိုင်း အေးတိအေးစက်ကြီးပါပဲ။ (၅) လောကကြီးမှာ မာယာများတတ်တယ်နော်။ တချို့ညတွေမှာ ကြယ်တာရာတွေရံပြီး တချို့ညတွေမှာ လင်းနို့တွေ သင်းဖွဲ့ပျံနေကြတယ်။ မြင်းစီးသူရဲချင်းတူတာတောင် ကိုင်တဲ့ကျာပွတ်ချင်းမတူဘူး။ အဲဒီလို မျက်လှည့်ပြတတ်တဲ့ လောကကြီးထဲမှာမှ ဒီမွန်းဟာ ဟမ်းလော့ကိုချစ်ရတာ ဘီလူးတစ်ကောင်က ရွှေမင်းသမီးလေးကို မြတ်နိုးရသလိုပါပဲ။ ဟမ်းလော့ဘက်ကတော့ ဒီမွန်းကို ကြောက်တာတစ်ခုတည်းသိပြီး ဘာမှ အလေးအနက်မရှိခဲ့ပါဘူး။ အောင်မှာ မဟုတ်တဲ့ စာမေးပွဲကြီးတစ်ခု ဖြေခိုင်းပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ ပထုတ်လိုက်တာပါ။ မတော်တဆ အောင်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကျဦးတော့ ဒီမွန်းက နောက်ဆုတ်မပေးရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလည်း သူမ ကြိုတွေးမထားပါဘူး။ ဒီမွန်းရဲ့ စာမေးပွဲအတွက် အောင်စာရင်းထွက်ဖို့ နီးလာတာနဲ့ မြို့သူမြို့သားတွေ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်လာကြတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဟမ်းလော့တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းက မီးပုံပွဲတစ်ခုလုပ်ကြတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အဲဒီနေ့ဟာ ဒီမွန်း အောင်စာရင်းထွက်တဲ့ နေ့ဖြစ်တယ်။ အောင်စာရင်းကြည့်ဖို့အတွက် ဒီမွန်းဟာ မနက်အစောကြီး သူ့အိမ်က ထွက်သွားပါတယ်။ သူပြန်အလာကို ရင်မောမောနဲပ စောင့်ကြိုရင်း မြို့ကလေးလည်း ရင်ခုန်သံတွေ တရိပ်ရိပ်မြန်နေပါတယ်။ ညနေစောင်းတဲ့ အထိ ဒီမွန်း ပြန်ရောက်မလာပါဘူး။ ဟမ်းလော့တို့ဟာ ဒီမွန်း ရှုံးနိမ့်သွားပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ မီးပုံပွဲကို ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် စတင်လိုက်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်က ဟမ်းလော့ကိုနောက်တယ်။ "ဒီမွန်း အောင်ခဲ့ရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ" တဲ့။ ဟမ်းလော့က ချစ်စရာအမှုအရာလေးနဲ့ ရယ်ရင်း ... "သူ အောင်မှာမဟုတ်တဲ့ စာမေးပွဲပါ" လို့ ပြောတယ်။ ဟမ်းလော့ရဲ့အမေကလည်း နံဘေးနားမှာ ရှိတယ်။ နားသယ်စပ်က ဆံပင်တွေကို သပ်တင်သလိုလိုနဲ့ သူ့နားရွက်က စိန်နားကပ်ကြီးကို လူမြင်အောင် ပြနေတယ်။ ချင့်ချိန်တတ်ပုံရတဲ့ အရာရှိကြီးတစ်ယောက်က ၀င်ပြောတယ်။ "'ဒီမွန်းက စာမေးပွဲအောင်ချင် အောင်လာမှာ။ သိပ် လျှော့မတွက်နဲ့" တဲ့။ "ဒီမွန်းက ဥာဏ်ရည်သိပ်မြင့်တယ်။ သူ ဖြစ်ချင်တာကိုလဲ ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်" တဲ့။ အဲဒီစကားကြားတော့ ဟမ်းလော့ နည်းနည်းမျက်နှာပျက်သွားပြီး ဟမ်းလော့ရဲ့အမေက ထိုင်ရမလို၊ ထရမလို ဖြစ်သွားတယ်။ ခဏကြာတော့ နိုင်ငံခြားပြန်ဆရာဝန်တစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ ဒီမွန်း စာမေးပွဲကိစ္စကို တဟားဟားအော်ရယ်ပြီး ... "စိတ်ချပါဗျာ၊ ဒီမွန်းက ဘယ်လိုလုပ် အောင်မှာလဲ။ ဒီစာမေးပွဲအောင်ဖို့ဆိုတာ အမေရိကမှတောင် ... " ဘာညာပြောတယ်။ ဟမ်းလော့လည်း စိတ်အေးသွားတယ်။ ဟမ်းလော့ရဲ့အမေက ငွေစက္ကူကြီးတစ်ရွက်ကို ထောင့်စွန်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး နားဖားချေးကလော်နေတယ်။ (နားဖာချေးကလော်သလိုလိုနဲ့ နားရွက်က စိန်နားကပ်ကြီးကို လူသတိထားမိအောင် ပြနေတယ်) နောက်ထပ်ဧည့်သည်တစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ သူကတော့ ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီမွန်းနဲ့လည်း စကားအပြောအဆိုရှိတယ်။ "ဒီမွန်းက ရန်ကုန်ကို ဖုန်းနဲ့ကြိုမေးပြီး အောင်စာရင်းသွားကြည့်တာ" တဲ့။ "လေကလေးချွန်ပြီး ထွက်သွားတာပဲ။ အောင်တယ်ထင်တယ်" တဲ့။ သူ့စကားကြောင့် ဟမ်းလော့က နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ထားပြီး ဟမ်းလော့ရဲ့အမေက ထိုင်ရမလို၊ ထရမလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါနဲ့ သူတို့ကလည်း ရန်ကုန်က နှံ့စပ်တဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီ အဲ့ဒီစာမေးပွဲအကြောင်း ဖုန်းဆက်မေးလိုက်တယ်။ မိတ်ဆွေက ပြန်ပြောတယ်။ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲ အောင်တယ်။ ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ကျတယ်တဲ့။ ဟမ်းလော့က သက်ပြင်းချတယ်။ ဟမ်းလော့ရဲ့အမေက ၀မ်းသာအားရ ပြုံးလာတယ်။ ဟိုဘက်လှည့် နှုတ်ဆက်၊ ဒီဘက်လှည့်နှုတ်ဆက်နဲ့ သူ့စိန်နားကပ်ကြီးကို လည်လိမ်ပြီး ပြနေတယ်။ ညမှောင်လာတာနဲ့ အမျှ မီးပုံပွဲက ပိုပြီး စည်ကားလှပလာတယ်။ ဟမ်းလော့ရဲ့ အပေါင်းအပါတွေ အောင်ပွဲခံသလို စားသောက်နေကြတုန်း သတင်းတစ်ခုဝင်လာတယ်။ ဒီမွန်း မနက်ကထွက်သွားတဲ့ သူရဲ့ (သိမ်းထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့) နာမည်ကျော် ဓားမြှောင်ကို ကိုယ်မှာဆောင်သွားတယ်။ သူ စာမေးပွဲကျရင် ဟမ်းလော့ကို အကြမ်းနည်းနဲ့ လုယက်ခေါ်ဆောင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ ဟမ်းလော့က မျက်လုံးဝိုင်းနေပြီး ဟမ်းလော့ရဲ့အမေက ထိုင်ရမလို၊ ထရမလို ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တော့ ဧည့်သည်တစ်ယောက် အမောတကော ရောက်လာပြီး သူတို့ရှေ့မှာ ရပ်တယ်။ ဟမ်းလော့ရဲ့မျက်နှာ ဖြူဖပ်ဖြူရော် ဖြစ်လာတယ်။ ဧည့်သည်က အထစ် အထစ်နဲ့ ပြောတယ်။ 'ဒီမွန်း အခုပဲ ပြန်ရောက်လာပြီ' ဆိုလို့ ထရပ်မိတဲ့ ဟမ်းလော့ရဲ့အမေဟာ ... 'ဒီကိုတော့ မလာသေးဘူး' ဆိုတဲ့ စကားကြောင့် ပြန်ထိုင်မလို လုပ်ပြီးခါမှာ ... 'ဟော့ဒါပေးလိုက်တယ်' ဆိုတာကြောင့် မထိုင်မိဘဲ ကုန်းကုန်းကွကွ ဖြစ်နေတယ်။ (ခြုံငုံသုံးသပ်ရရင်တော့ သူ့ခမျာ ထိုင်ရမလို၊ ထရမလို ဖြစ်နေတယ်) ဒီမွန်းပေးလိုက်တာ စက္ကူအိတ်တစ်အိတ်ပါ။ အဲဒါကို သူတို့တွေ ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ ဖွင့်ကြတယ်။ "အို" ပထမဆုံး ထွက်လာတာကတော့ အဲဒီစာမေးပွဲကို ဒီမွန်က ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက် အောင်မြင်လိုက်တဲ့ အကြောင်း သိသာခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားစာရွက်ပါ။ ဟမ်းလော့တို့ အပေါင်းအပါတစ်စုလုံး မွှန်ထူသွားကြတယ်။ ဟမ်းလော့ဆိုရင် မျက်စိတွေပြာပြီး ကတုန်ကယင်ဖြစ်သွားတယ်။ 'ဆက်ဖတ်ကြည့်စမ်းပါဦး' လို့ ဘေးလူတွေက တုန်လှုပ်သတိပေးရတယ်။ ဆက်ကြည့်တယ်။ ဒုတိယထွက်လာတာ လင်္ကာတစ်ပုဒ်ပါ။ အရိုးခွံကို အရေပြားနဲ့ပတ်ထားတဲ့ ရုပ်အလှဟာ မမြဲသောတရားသာဖြစ်လို့ ဒီအပေါ်မှာ ဂုဏ်မမောက်သင့်ဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်း ဆုံးမထားတဲ့ သံဝေဂလင်္ကာကြီးပါ။ တတိယထွက်လာတာကတော့ လျှာထုတ်ပြောင်ပြရင်း လက်ဝှေ့ရမ်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့ ကာတွန်းရုပ်ပါပဲ။ အောက်က စာတစ်ကြောင်းရေးထားတယ်။ "ဒီဘ၀မှာ နှမလက်လျှော့နေလေတော့" ဟု။ အဲ့ဒီအောက်ကနေ ဒီမွန်းရဲ့လက်မှတ်ကို သူ့နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးထိုးထားတယ်။ (၆) အဲဒီညနေဟာ ရွှေအိုရောင်မြူခိုးတွေနဲ့ ရိုးရိုးသားသားလှပနေခဲ့တယ်။ ဒီမွန်းက သူ့ကိုစာပြပေးတဲ့ ဆရာမလေးဆီ ၀င်နေတာပါ။ "မမ ကျွန်တော် စာမေးပွဲအောင်တယ်" ဆိုတော့ ကောင်မလေးက ကြည်ကြည်လင်လင် ပြန်ပြုံးပြတယ်။ ဒီမွန်းက သူ့ကိုယ်ပေါ်က ဓားမြှောင်ကို ကောင်မလေးရဲ့ အရှေ့ဘက်မြေပြင်မှာ ပစ်ချပြီး ... "ကျွန်တော့်လူမိုက်ဘ၀ကို မမရှေ့မှာ ကျွန်တော် လက်နက်ချလိုက်ပြီ။ ကျွန်တော့်ကို ဒီမွန်းလို့ မခေါ်နဲ့တော့" လို့ပြောတယ်။ နောက်ထပ်လည်း စကားတွေ အများကြီးပြောတယ်။ တိုးညင်းနွေးထွေးတဲ့ သူ့စကားတွေကို နားထောင်ရင်း ကောင်မလေး မျက်လွှာချတယ်။ အေးငြိမ်းတဲ့မျက်နှာလေးဟာ တဖြည်းဖြည်းအောက်ငုံ့သွားတယ်။ လေတွေ တသုန်သုန်တိုက်တဲ့အခါ သူ့ဆံနွယ်မျှင်လေးတွေက အနုပညာဆန်ဆန် မျောလွင့်နေကြတော့တယ်။ ဒီမွန်း (Demon) = နတ်ဆိုး စာကြွင်း ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော်က ... (က) စိတ်ကူးယဉ်၍ ရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ (ခ) ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုကို ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်လို့ အဆိုနှစ်ခု ပေးခဲ့ရင် ဘယ်ဟာမှန်တယ် ထင်ပါသလဲ။ ရဲရဲတွေးပြီး အမှား၊အမှန် ခြစ်ကြည့်စမ်းပါ။ တာရာမင်းဝေ Labels: ♦kzh1980@gmail.com	posted by kaungzawhtet @ 07:56 PM hits(313)
♦ဓါးမှတ်စု( တာရာမင်းဝေ )
သူတို့ကိုလာခေါ်သောအချိန်တွင် အံ့သြခြင်းမရှိဘဲ သူတို့တွေ လိုက်ပါသွားကြ၏။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘဲသူတို့တွေတိတ်ဆိတ်နေမိကြတာ သေချာသည်။ အိမ်ကြီးကစိုပြည် သော်လည်းခြောက်ကပ်နေ၏။ခမ်းနားထည်ဝါလှသောဤအိမ်ကြီး၏ဒြပ်မဲ့အထိအတွေ့က သူတို့၏တက်ကြွမှုကိုကျိုးဝပ်ကျစေသယောင်ရှိသည်။ပြတင်းမှန်ကိုဖြတ်၍ မြင်နေရသော အပြင်လောကကအမှောင်ပျပျဖြင့်ရှင်းနက်ဝန်းပျံ့နေသည်။တံခါးများကိုအလုံပိတ်ထား သည်ဖြစ်သောကြောင့်လေပြည်ညင်း၏ရနံ့ကိုရှူရှိုက်ခွင့်မရ။လူသေပန်သော ပန်းရနံ့ကိုသာ ရသည်…ဟု တစ်ယောက်က တီးတိုးပြောသည်။ စိတ်ထဲက လက်ခံမိ သော်လည်း နှုတ်၏တုံ့ပြန်မှုကို မည်သူကမှ ပြန်မပြုမိကြ။သန့်ပြန့်မှုနှင့်အတူ လျှို့ဝှက်မှုတို့ကပါ ထွေးလိပ်နေသောအခန်း ဖြစ်၏။ အလင်းမှိန်မှိန်ဖြင့်ညိုထိန်နေသည်။ ထိုင်ခုံများမှာအသီးသီးဝင်ထိုင်လိုက်ကြပြီး မကြာမီရောက်လာတော့မည့် အိမ်ကြီးရှင်ကို စောင့်နေလိုက်ကြ၏။ အလင်းရို့ရို့ကလေးနှ့င်လာလုလာဆဲ လူကို စောင့်မျှော်နေရခြင်းသည်တီးခတ်လုဆဲဆဲဂစ်တာကို ကြိုးညှိနေရသည့် အသွင်ရှိ၏။ သို့သော်လည်း ရှည်ကြာစွာ စောင့်ဆိုင်းလိုက်ရခြင်း မရှိပါ။ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူက ခြေသံပင် မကြားလိုက်ရဘဲ ရောက်လာလေသည်။ ”နေရထိုင်ရတာ အားလုံးအဆင်ပြေကြတယ် မဟုတ်လား” တိုးညင်းသိမ်မွေ့သော်လည်း မာန်ပါသည့်အသံဖြစ်၏။ ”ဟုတ်ကဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်” တစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြန်ဖြေရင်းထိုလူကိုအကဲခတ်လိုက်ကြသည်။ ထိုလူသည် အသက်(၃၅)နှစ်ခန့်ရှိပြီးပျောင်းနွဲ့ရှည်လျားသောဆံနွယ်များက ပခုံးပေါ်ဝဲကျနေ၏။ပိန်သွယ်သော ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျိုးအမည် ခွဲရခက်သော ၀တ်ရုံရှည်ကြီးတစ်ထည်ကို ၀တ်ဆင်ထား၏။ မျက်နှာကနူးညံ့သော်လည်းအရယ်အပြုံးကင်းမဲ့သည်။သူ့ပုံစံက ရေအေးထဲမှ ဆွဲထုတ်လာ သော ဓါးတစ်လက်ပမာရှိသည်။ `` စားကြလေ……သောက်တတ်ရင်သောက်ပါ” စားပွဲပေါ်မှ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ထိုလူက မေးဆတ်ပြကာ ပြော၏။ စားပွဲပေါ်မှာ ၀ိုင်ပုလင်း၊အသားကင်အချို့နှင့်ပန်းသီးများအစီအရီရှိနေ၏။အယောင်ယောင် အရမ်းရမ်းနှင့်ပင်သူတို့တွေလက်ကိုယ်စီလှမ်းလိုက်ကြ၏။ထိုလူ့လက်ထဲတွင် အာရပ်စာရေးဆရာကြီး `` ခါလီဂျီဘရန်”၏ `` နိမိတ်ဖတ်သူ” အမည်ရှိ စာ အုပ်ကို ကိုင်ထားသည်။ စာအုပ်ကို သူတို့က အကဲခတ်နေမှန်းသိသဖြင့် ”ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးကြသလား” ဟု အေးတိအေးစက်မေးသည်။ ”ဟင့်အင်း မဖတ်ဖူးပါဘူး ကြားရုံကြားဖူးတာပါ” ထိုလူကသူတို့နှင့်အတူပန်းသီးတစ်လုံးကိုဆွဲယူကာတစ်ချက်ကိုက်၏။ထို့နောက် ပန်းသီးကိုကိုင်မြှောက်ပြီး အိပ်မက်မက်သူတစ်ယောက်လို ရေရွတ်သည်။ ”ပန်းသီးကလေးရေ မင်းရဲ့သစ်စေ့ဟာ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သီတင်းသုံးပါ၊ ငါ့ရဲ့ နှလုံးသား ဥယျာဉ်ထဲမှာအငုံအဖူးတွေဖြစ်ပြီးဆက်ပွင့်ပါ။ငါ့ရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ဟာမင်းရဲ့ပန်းရနံ့ပဲ ဖြစ်ရတော့မှာပေါ့” သူတို့တွေတစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်မိကြသည်။တစ်ယောက်က လက်ကုတ်ပြီးနံရံတစ်နေရာဆီသို့ ညွှန်ပြ၏။ ထိုနေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ဓါး(၅)လက်ရှိ၏။ထိုသူ၏အနေအထားကိုအကဲခတ်မိပြီဖြစ်သောကြောင့်အခန်းထဲဝင် စကတည်းကတွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သောဤဓါးများသည်အလှသက်သက်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း ကိုခံစားလိုက်မိကြသည်။ ထိုလူကအလွန်ပါးနပ်လေသည်။သူတို့ကမသိမသာဝေ့ကြည့်မိသည်ဖြစ်သော် လည်းသူတို့စိတ်ထဲမှ ဓါးအာရုံကို ထိုလူက ဖမ်းဆုပ်ထားလိုက်နိုင်သည်။ ခပ်တိုးတိုးရယ်၏။ သို့သော် ရယ်သံကရှည်လျားကာ မီးခိုးငွေ့တို့၏ ရွေ့လျားသံပမာ ဖြစ်နေသည်။ `` ခင်ဗျားတို့က ဒီဓားတွေကို စိတ်ဝင်စားနေလို့လား” မေးသံကခပ်အက်အက်ဖြစ်၏။အားလုံးကလည်းမင်သက်သလိုဖြစ်နေကာ ထိုလူ့အမေး ကိုပြန်မဖြေမိကြ။ထိုလူကထပ်ရယ်သည်။ရယ်သံအဆုံးမှာနံရံကပ်ဓါးတစ်လက်ကို ဆွဲထုတ်ယူလိုက်၏။ ”သြော်…”ဓါးကသံချေးအထပ်ထပ်တက်နေပြီ။ အညိုလဲ့လဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာ လက်ထဲမှဓါးကိုထိုလူငေးကြည့်နေပုံက ဒဏ္ဍာရီဆန်လွန်းလှ၏။ သူတို့အားလုံး အသံမထွက်ရုံတင်မကဘဲ မည်သည့်လှုပ်ရှားမှုကိုမှမပြုမိသည်အထိငြိမ်ဆိတ်နေ မိကြသည်။တိုးညင်းသော်လည်း အားလုံးကြားနိုင်လောက်သည့် ထိုလူ့စကားသံကသာ ပေါ်ထွက်ပျံ့လွင့်လာသည်။ `` အမှန်တော့ ဒီဓါးက ကျွန်တော့်ဘ၀ကို သေအောင်သတ်ခဲ့တဲ့ ဓါးဗျ။ ကျွန်တော့်ကို အကြိမ်ကြိမ်ခုတ်ထစ်ခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာဒဏ်ခံအားရှိတယ်။ဒါ့အပြင် တိမ်းညွှတ်အားရှိတယ်” ထို့နောက်……သူတို့အားလုံးကိုဆတ်ခနဲ လှည့်ကြည့်ကာ…… ``စောင်းကောက်ကိုခင်ဗျားတို့မြင်ဖူးမှာပေါ့။စောင်းဆိုတာအစကတော့သစ်သားပဲဖြစ် တယ်။ဓါးရဲ့အထပ်ထပ်ခုတ်ထစ်မှုကိုတိမ်းညွှတ်ခုခံရင်းသူ့ကိုယ်သူ စောင်းကောက်ဖြစ် အောင် ဖန်တီးပစ်လိုက်နိုင်တယ်။သီချင်းတွေကိုတောင်ဆိုပစ်လိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပဲပေါ့” သက်ပြင်းတစ်ချက်ချသည်။ ထိုလူ့မျက်လုံးများက ၀င်းလက်နေသည်။ `` နောက်ဆုံးတော့ ဒီဓါးဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်လာတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀ချိုလွင်လှပဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သူလို့ပဲသဘောထားပါတယ”် ထိုဓါးကို ဓါးအိမ်ထဲပြန်ထည့်ကာ နောက်ဓါးတစ်လက်ကို ဆွဲထုတ်ပြ၏။ နောက်ဓါးကလည်း သံချေးများနှင့် နီမွဲလျက်ပင်ရှိသည်။ `` ဒါကတော့ နောက်ကျောကို အထိုးခံခဲ့ရတဲ့ ဓါးပေါ့” ချွန်မြသောထိုဓါးဖျားကို လက်ညှိုးနှင့် ပွတ်သတ်နေရင်း ထိုလူ့မျက်နှာမှာ မထီတရီ အငွေ့ အသက်တို့ထင်ဟပ်လာသည်။ ဓါးကိုကြည့်ပြီး ပြောသလိုလိုနှင့် သူတို့ကို ဆက်ပြောသည်။ ”ဘာပဲပြောပြောအကျိုးတော့မမဲ့ခဲ့ပါဘူးဗျာ။ကိုယ်ခလုတ်တိုက်လဲခဲ့တယ် ဆိုတာကလည်း ဒီနေရာမှာ ခလုတ်ရှိတယ်လို့ တစ်ခြားလူတွေကို သတိပေးနိုင်ဖြင်း တစ်မျိုးပါပဲ” ထိုဓါးကိုဓါးအိမ်ထဲပြန်သိမ်းလိုက်ပြန်သည်။ မြေကျင်းထဲသို့ ၀င်ရောက်သွားသော နဂါးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ဓါးကဖြောင့်ဖြူးစွာဝင်ရောက်သွား၏။တတိယဓါးကို ဆွဲထုတ်လိုက် သောအချိန်မှာထိုလူ၏ ဓါးအကိုင်အတွယ်ကျွမ်းကျင်မှုကို သူတို့အားလုံး သတိပြု လိုက်မိကြသည်။ `` ပန်းသီးကိုတောင် လှီးစားလို့ မရဘူးဗျ” စားပွဲပေါ်ပြန်ချထားသည့် သူ့စားလက်စ ပန်းသီးကို ဓါးဖြင့် ဆတ်ခနဲ ခွဲသည်။ ဓါးချက်ကသေသပ်သော်လည်း စားချင်ဖွယ်ရာ မရှိတော့လောက်အောင်ပန်းသီးမှာသံချေး တွေလူးပေသွား၏။ပန်းသီးကို ငေးကြည့်နေရင်း ထိုလူက လေးတွဲ့စွာပြောသည်။ ”ဒီဓါးက ခုနကဓါးထက် ပိုဆိုးသလိုပဲ။ နောက်ကျောကို ထိုးတဲ့ဓါးမဟုတ်ဘူး။ ပခုံးချင်းယှဉ် သွားနေလျက်ကနံကြားကိုလှည့်ထိုးခဲ့တဲ့ဓါး။အေးလေ…ဘာပဲပြောပြောသဘာဝ ကျပါတယ်။ ဓါးဆိုတာကတော့ သူရတဲ့ထောင့်က ၀င်လာမှာပါပဲ” နောက်ထပ်ထုပ်ပြသည့်စတုတ္ထဓါးသည်လည်းရှေ့ဓါးများနည်းတူသံချေးတို့ နွယ်ကပ်လျက်ရှိသည်။ထူးခြားသည်က ပန်းခြူးပန်းရစ်များဖြင့်လှပသော ဓါးဖြစ်နေသည်။ ထိုလူက ထိုဓါးကိုအကြာကြီး ငေးကြည့်နေသည်။ ဘာစကားမှ မပြော…။ သူတို့အားလုံးသည်လည်း ဓါးဆီငေးကြည့်နေသောထိုလူ့အကြည့်မှာ တွေးမောမျောပါ နေမိကြသည်။ထိုလူက ဓါးကို ဓါးအိမ်ထဲ ပြန်ထည့်လိုက်သည်။ ဘာမှမပြောသေးဘဲခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်သည်။ထို့နောက်မှာမူ… ``တစ်ခါက ကျွန်တော့်မှာ အဖော်တစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဖော်ဆိုတဲ့ သဘောထက် မကခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဖော်လည်း မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ထားလိုက်ပါတော့” ဓါးများ၏ အအေးငွေ့လား၊ ထိုလူ့ထံမှ ဝေဖြာထွက်သည့် အအေးငွေ့လား မခွဲခြားနိုင်။ အခန်းထဲမှာအနွေးဓါတ်တို့ပြယ်လျပြီးချမ်းရှရှဖြစ်လာသည်။ညှို့ချက်မိသူများလို ထိုသူ့မျက်နှာကို တစိုက်နစ်နစ်ကြည့်နေမိကြသည်။ `` အဖော်ဆိုတာ ကိုယ်ဖြတ်သန်းရမယ့် အချိန်တွေအတွက် သူ့ကို အသုံးချဖို့ မဟုတ်ဘူး။ သူရယ်…ကိုယ်ရယ်အချိန်ထဲမှာ အတူတူဖြတ်သန်းသွားလာဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ မိုးသည်းတဲ့ ရာသီဥတုတွေမှာတစ်ယောက်ဟာတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ပေါ့။အရိုးကွဲအောင် နှင်းတွေကျ နေချိန်မှာတစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်ရဲ့ မီးလင်းဖိုပေါ့။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး ကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။နောက်တော့လည်း…အေးလေ…ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ…ဓါးဆိုတာရတဲ့ ထောင့်က ၀င်လာတတ်တယ်။ ခုနကဓါးဟာ ရင်အုံကို တည့်တည့်ဝင်လာခဲ့တဲ့ဓါးပဲ” ထိုလူ့ကိုအားပေးဖျောင်းဖျလိုစိတ်ရှိသော်လည်းအားပေးဖျောင်းဖျရမည့်လူမဟုတ်ဟု အလိုလိုခံစားမိကြပြန်သည်။တုံ့ပြန်သောအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ဖက်ပြိုင်သော အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ပြန်ပြောရမည့်စကားတို့က မရှိလှ။ ထိုလူပြောသမျှကို နားထောင်ပြီး ထိုလူလှုပ်ရှားသမျှကိုသာ လိုက်ကြည့်နေမိကြ၏။ စတုတ္ထဓါးကိုသိမ်းခြင်းနှင့်ပဉ္စမဓါးကို ထုတ်လိုက်ခြင်းသည် တစ်ချက်တည်းဖြစ်ပြီး လျှင်မြန်လွန်းလှ၏။ထို့ထက်ပို၍အံ့သြစရာကောင်းသည်ကပဉ္စမဓါးသည်ယခင်ဓါးများကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲဝင်းတောက် လှပနေလေသည်။ `` ဒီဓါးကတော့နာမည်မရှိသေးဘူးဗျ…ကျွန်တော့်ကိုလည်း မထိုးစိုက်သေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဓါးတွေရဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထိုးစိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုတင်နေရာပေးထားရတယ်” တစ်ကိုယ်တည်းရေရွတ်သလို ဆက်ပြောသေးသည်။ `` ဒါပေမယ့် မကြာတော့ပါဘူးလေ လာတော့မှာပါ။ ကျွန်တော်စောင့်နေမှန်းလည်း သူသိပါတယ်။ လာတော့မှာပါ” ထိုသို့ပြောကာဓါးကိုအထက်ဆီသို့ပစ်မြှောက်တင်လိုက်၏။တဖျပ်ဖျပ်လွင့်လူးလျက် အထက်သို့ လှပစွာပျံတက်သွားသည့် ဓါးကို ထိုလူနှင့်အတူ အားလုံးက ၀ိုင်းကြည့် နေမိကြသည်။ ”အိုး…” တိုင်ပင်ထားခြင်းမရှိပါဘဲရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲစိုးရွံ့သွားမိကြ၏။ဓါးအကိုင်အတွယ် ကျွမ်းကျင်ကာ ဓါးယဉ်ကျေးမှုနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လွန်းလှသော်လည်း…… ထိုဓါးကိုမိအောင်ထိုလူပြန်ဖမ်းနိုင်ပါမည်လား…ဓါးကတော့လေထဲမှာတဖျပ်ဖျပ်ပျံသန်း လည်ပတ်နေဆဲ…ထိုလူနှင့်ထိုဓါးကိုအသက်မရှူဖြစ်ဘဲငေးကြည့်ကာ စောင်းကြိုးတို့ကို ခုတ်ဖြတ်ရန် အဝေးမှရောက်ရှိလာမည့် ဓါးအော်သံကို……စိတ်ထဲမှ ကြားလာရသလိုလို ရှိလေသည်။ တာရာမင်းဝေ Labels: ♣kzh1980@gmail.com	posted by kaungzawhtet @ 03:30 PM hits(189)
" သံသရာ" သံသရာ ကျင်လည်ရတာ သိပ်ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းပါတယ်။မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ရပိုင်ခွင့်တွေ၊ခံစားချက်တွေနဲ့ဆိုတော့ သံသရာကျင်လည်ရတာဟုတ်သလိုလိုရှိနေတာပါ။တကယ်တော့လည်း ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခတွေက ကပ်ပါလာပြီးသားပါ။ဘယ်လောက် ပြည့်စုံ ပြည့်စုံ ပျော်ရတဲ့ရက်ကနည်းပါတယ်။စိတ်ညစ်ရတဲ့ရက်က များများရယ်ပါ။ဒီကြားထဲ လောကဓံဆိုးတွေနဲ့လည်း ကြုံနိုင်ပါသေးတယ်။ အလင်းတန်းဂျာနယ် ရဝေနွယ်(အင်းမ) " လောကဓံတရား ၈ ပါး " လောကဓံတရားဆိုတာ လောကသားတို့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမြဲတရားတဲ့....အဲဒီလောကဓံတရားဟာ.... အကောင်းဘက်က ၄ ပါး အဆိုးဘက်က ၄ ပါး ပေါင်း ၈ ပါးရှိတယ်။ ၁။ ယသ - မခြံအရံ အကျော်အစောဖြစ်ခြင်း ၂။ အယသ - အခြံအရံမဲ့ခြင်း အကျော်အစောမဲ့ခြင်း ၃။ လာဘော - လာဘ်ရခြင်း ၄။ အလာဘော - လာဘ်မရခြင်း ၅။ နိန္ဒာ - ကဲ့ရဲ့ခြင်း ၆။ ပသံသာ - ချီးမွမ်းခြင်း ၇။ သုခံ - ချမ်းသာခြင်း ၈။ ဒုက္ခံ - ဆင်းရဲခြင်း ဒီတရားရှစ်ပါးဟာ လောကအတွင်းရှိနေကြသမျှ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ တရားမျိုးမို့လို့ လောကဓံတရားလို့ခေါ်ကြရတယ်။ ဒီလောကဓံတရားနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့လျှင် ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိသလောက်ရှားပါးပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဘုရား ရဟန္တာများမှာတော့ လောကဓံတရားနဲ့ တွေ့ကြုံတဲ့အတွက် တုန်လှုပ်မှုမရှိကြဘူး....။ " ဖုဌဿ လောကဓမ္မေဟိ ၊ စိတ္တံ ယဿ နကမ္ပတိ ၊ အသောကံ ၀ိရဇံ ခေမံ ၊ ဧတံ မင်္ဂလ မုတ္တမံ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာအမေးအဖြေများ(၅) ထီးချိုင့်မြို့ တည်တော ဆရာတော် Labels: kzh1980@gmail.com	posted by kaungzawhtet @ 06:13 PM hits(284)
"ဓမ္မစာပေများ ဆုံးမသြ၀ါဒများ"	﻿ ရေးသားမှုများ B i u Quote Code List List item URL အမည် *	အီးလ်မေး Code နှိပ်ပါ ရေးသားရန်/ပြန်သိမ်းရန် Labels: ►kzh1980@gmail.com	posted by kaungzawhtet @ 06:03 PM hits(214)
♦ပိတောက်နှင့်အပြိုင်.... ၂၀၁၀ သင်္ကြန်မှာ....
♦ပိတောက်နှင့်အပြိုင်.... ၂၀၁၀ သင်္ကြန်မှာ....သူငယ်ချင်းအားလုံးပျော်ရွှင်လန်းဆန်းပြီး.... နှစ်သစ်ကို...အကောင်းဆုံး....ကြိုဆိုဖြတ်သန်း....အောင်မြင်နိုင်ပါစေကြောင်း.... Labels: ♦kzh1980@gmail.com	posted by kaungzawhtet @ 07:45 PM hits(210)
ဤကို ငါ ဖြတ်ကူးအံ့ အိပ်မက်ဦဲး့၌ ဘီလူးကြမ်းတို့ စောင့်လိုက စောင့်စေ....။ သူကပန်းပွင့်ကလေးကိုနမ်းတယ် ငါ လူ စင်စစ်က ပန်းပွင့်ဖြစ်ပါစေသား....လို့ ကျွန်တော်ဆုတောင်းမိပါတယ်....။ တောအုပ်က ကျယ်ပြီး သားရဲက ငယ်တယ်.... တောအုပ်ကိုချီဆွဲတဲ့ ခြသေ့င်္ကို သားရဲဟာ ငါ....ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်....။ တောအုပ်ကကျယ်ပြီး ခြသေ့င်္က ငယ်တယ် ဒါပေမယ့် ခြသေ့င်္ပြောသမျှ တောအုပ်က နားထောင်အောင် မင်း ငါ့အတောင်ပံလေးတွေလုပ်ပေးပါလား အချစ်ရယ်....။ ငါကတော့ မြက်ဖိနပ်နဲ့ ဒါပေမယ့် မြင်းမိုရ်တောင်ကိုလည်း လိုက်တက်ခဲ့မယ်။ သွားနှင့်ကြပါ....။ ဟိုးမှာ ဘုရားသခင် ရှေ့တော်မှောက်က အိပ်မက်တွေ ဒူးထောက်လဲကျနေတဲ့လူ သူ့ကို ကူပါရစေဦး....။ ငါ မငိုဘူး။ ဒါပေမယ့် နှလုံးသားမှာ ဘီလူးဝင်ပူးတယ်....။ လက်သည်းချွန်သိပ်များတဲ့ မှော်ဆရာက ငါ့နှလုံးသားကို ရင်ဘတ်ကနေဆွဲခွါတယ် နာကျင်ပေမယ့် ငါ မငိုဘူးကွယ်....။ ငါ့ ကောင်းကင်မှာ နက္ခတ်တွေ ကြမ်းပြီး င့ါ လမ်းက တောင်ပြိုနေတယ် ငါ့ နောက်ကို ဘယ်သူမှမလိုက်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် ငါ့အရိပ်တောင် ငါ့နောက် မလိုက်နဲ့....။ Labels: ♣Kaungzawhtet>Yangon>Myanmar.	posted by kaungzawhtet @ 07:27 PM hits(306)
တာရာမင်းဝေ ကဗျာများယေဘုယျဝိညာဉ် င့ါကိုတော့ ခွင့်တောင်းသင့်ပါတယ်ငါ့နှာခေါင်းပေါ်တက်ပြီးဘယ်သူလာ အသက်ရှုနေတာလဲ ..မင်းကသာဟိုဘက်က အပ်နဲ့ မမှုတ်ဘူးဆိုရင်မင်းလက်ထဲကပြောင်းကိုဒီဘက်က ငါချောင်းကြည့်ရဲမှာပါ .. ။ငါက ..တွေ့နေကျ၊ မြင်နေကျ၊ရိုးရိုးလူမျိုးပေါ့ပန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကောက်ရိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရမ်းလာပစ်ပေါက်ရင်တော့ကြောက်တတ်တဲ့ ကောင်မျိုးလေ ..။ဆောင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ နှင်းတစ်စက်လိုစာရင်းလည်းမရှိ၊ နံပါတ်လည်းမသိဘယ်အထိမှလည်း မကြီးကျယ်ပါဘူးကွယ် .. ။ငါက ... သာမညလူ .. ။ငါက ... ယေဘုယျလူ ..။ဆပ်ပြာပူဖောင်းလိုအရေခွံတစ်ထပ် ခွာလိုက်ရင်ပဲအထဲမှာ ဘာမှကျန်မှာ မဟုတ်တဲ့လူ ... ။ဘယ်သူကမှ မသိဘူး ဆိုရင်တောင်ငါ့ကိုယ်ငါတော့ သိတာပေါ့သိပ်ကို သိတာပေါ့ကွယ် .. ။(ဒီဇင်ဘာ + ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၇+၉၈)တာရာမင်းဝေ ကျွန်တော်နှင့် သနပ်ခါးပွင့်ကလေး စစ်မက်ပြိုင်မိုးကြယ်ကလေးတွေ စီးချင်းမထိုးကြပါနဲ့။မိုးချုပ်အိမ်ပြန်လမင်းကို ပန်တဲ့မိန်းကလေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အိပ်စက်နေလို့ပါကွယ်။တာရာမင်းဝေ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ကျွန်တော်ကပြောတော့ .... .. ချစ်သူကရယ်တယ်။ကိုယ်သာသူ့လိုခွေးတစ်ကောင်ဆိုရင်မဟောင်ပါဘူးကွယ် ..။စောင့်ဆိုင်းတိတ်ဆိတ်မကိုက်ချင်ရင် အိပ်နေမှာပေါ့ .. လို့။စကားအဆုံးမှာ ကျွန်တော်ကတော့ ရှူတည်တည်ပါပဲချစ်သူကလည်း ရယ်မြဲရယ်လို့။ တာရာမင်းဝေ ပူဖောင်းကွဲသူ ဟိုတုန်းကတော့ပူဖေါင်းလေးတွေလို ဖြူမွေ့ပါးလျားအဲဒီ နွေရာသီလေးကို ဘယ်သူမှခိုးမစားခဲ့ကြဘူး။မြို့ကလေးရဲ့ရင်ဘတ်ကို ကြယ်သီးဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်တိမ်တွေကိုဘယ်တော့မှ တွန်းမလှဲတတ်တဲ့ကောင်းကင်မြင်ရတယ်။နောက်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကျွတ်ကျွတ်ရွရွဝေးကွာသွားဘ၀သံသရာဟာ သီချင်းထဲကလိုရထားကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအကိုင်းချင်းမတူပေမယ့် ဒီအတိုင်းပွင့်ကြလိမ့်လို့ကျွန်တော်ထင်မှတ်မှားခဲ့။မြို့ကလေးကိုသတိရမိတဲ့တစ်နေ့မှာကိုယ့်ကိုိုယ်ကို သတိမရတဲ့နယ်လွန်သားတွေ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမေမေရယ်ပူဖောင်းကိုမန်းမှုတ်သလို မှုတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာ ၀လုံးတစ်လုံးစာ စိမ့်ပြီးရှက်ခဲ့ရပေါ့။အဲဒီမှာတချို့ဟာ ရယ်သလိုမောသလို အမှောင်ပွက်ပွက်ထတချို့ကျတော့လည်းလိမ်မာပါးနပ်လွန်းတဲ့ အလင်းတန်းကြီး အမြှီးနှစ်ခွနဲ့။မေမေအားလုံးက မမှားရအောင်ကျွန်တော်ကပဲ မှားပေးလိုက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီပူဖာင်းလေးကို အသစ်ပြန်မှုတ်ဖို့နက်ဖြန်ခါမှာမြို့ကလေးဆီကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြန်လာမယ်….။တာရာမင်းဝေ(မိုးလှိုင်ညထံမှ ကူးယူဖော်ပြသည်) သစ္စာတရားအတွက် မီးအိမ်တစ်လုံးနှင့် ၁။အရှင်...သင်၏ခေါ်ရာထပ်ချပ်...ငါ...လိုက်ပါမည်။ကြယ်တစ်ပွင့်ကိုဆွဲယူငါ့ကို...ထူပါ။ဟိုးမှာ...သေအံ့မူးမူးလူကမြေပြင်ပေါ်ကသူ့အရိပ်ကိုကပျာကယာ အိတ်ထဲယူကောက်လက်သည်းတွေတောင် ခွေခေါက်နေပြီ။ဒီမှာ...ဦးခေါင်းခွံထက်ဆံဖြူတွေဝပ်တွားတက်နေတဲ့အဘိုးအိုတောင်ဝှေးကျိုးကိုရီဝေကြည့်ငေးသူ...ဘာတွေ တွေးပြီနည်း။စမ်းရေကိုငုံ့သောက်မှကိုယ်မျက်နှာကိုယ်ပြန်မြင်ရသောလူများအခြားဘာကိုတွေ့စွမ်းမလဲကွယ်။အတ္တဆိုင်းဘုတ်ကိုလည်မျိုမှာသံငုတ်နဲ့ရိုက်လမ်းမှာလိုက်သောခရီးသည်များသံသရာရထားကိုစောင့်နေသည်။၀ါးတစ်ပင်ရိပ်မှာခြင်္သေ့တို့ပင်အိပ်ဝံ့ပါသလား။၀ါးတစ်ပင်ရိပ်၌သူတော်စင်တို့ ပျှော်ပိုက်ခဲ့ကြပြီ။အမှောင်ကနက်၏ကြယ်ကလက်မည်ဤခရီးဝေးသလားငါ...ရောက်အောင်သွားပါမည်လေ...။၂။နွေ...နွေ မိုး မိုးတွင်းထဲမှာ နှင်းခဲတွေပုပ်သိုးနေရော့သလား။ဆောင်းကိုပန်ပြီးမြောက်ပြန်လေရောက်လာမှပြာဝေမှိုင်းအုပ်ဟော ... နှင်းတွေတစ်ဆုပ်ပြီးတစ်ဆုပ်။သဲကန္တာရကသဲတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြသလိုမာယာလောကမာယာတွေနဲ့ မှုံရီအုံချနေတယ်။ကျောက်ဆစ်ရုပ်ကခေါင်းညိတ်ပြရုံမဟုတ်လက်ခုပ်တီးပြီး လက်အုပ်ချီပြတာငါ တွေ့ခဲ့ဖူးပြီ။သွေးစက်တွေနောက်မှာလက်သည်းနီစက်ရဲရဲတောက်ပြတာငါ တွေ့ဖူးပြီ။ကျွဲချိုမှုတ်ပြီးကျွဲအုပ်ကိုဖျော်ဖြေတာပျှော်စရာမှမဟုတ်ပဲကွယ်။၁၂ကြိုးကသောလောက၏ကဝေလက်ချောင်းများငါ့အား...ဆွဲခေါ်ငါ... မမွေ့ပျှော်တော့ပါပြီ အရှင်။၃။ငါသည်...တစ်ခါက ဖယောင်းတိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်မီးတောက်ကိုချစ်လေသည်။မိုး၏အမြင့်ကိုမသိ...ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ရှိ၏။အမှန်ကား...မြေ၏အနက်မှာပင်ေ၀၀ါးဆဲ။စီးမျောရာတွင်ဗေဒါကို ကုပ်ဖက်အနက်ရောင် လှိုင်းခေါင်းများကြားမှာဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းပွားလျက်။ထိုသော... မနေ့ကငါသည်ဝါကျင်ဟောင်းနွမ်း နေလုံးကိုထမ်း၍တောင်စွယ်တန်းမှာ ၀င်ရောက်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ပြီ။ဤယနေ့ ... ငါ ... သည်မီးခိုးကဲ့သို့ မိုးပေါ်ထိုးတက်နှုတ်ဆက်ထွက်ခွါအားလုံးကို လွှတ်ချခဲ့ချင်ပါပြီ။ငါသည် ငါ၏ဘုရင်ဖြစ်၍ငါသည် ငါ၏ပြည်သူဖြစ်၏။ငါ့ကိုငါက အုပ်ချုပ်၍ငါ့အလုပ်ကိုငါလုပ်ရပေတော့မည်။၄။ဥပုသ်သည် သီလကျိုးတော့ဘုရားရှိခိုးရင်း ရှက်လေသည်။ငါတို့သည်...လူသားများဖြစ်၏လက်ဖ၀ါးမှာအမှားလက္ခဏာပါလေသည်။ဟိုချိုး ... သည်ကွေ့ချွတ်ယွင်းသော မောင်းတံဖြင့်ရွှေ့လျားလမ်းလျှောက်နေသော သင်္ချိုင်းမှတ်တိုင်များဖြစ်၏။အပ်ချည်နှင့်ပြန်ချုပ်ထားသောစက်ရုပ်၏အစိတ်အပိုင်းများပမာတစ်ခါတစ်ခါမှီတွယ်ရာလည်း မဲ့တတ်သည်။အို ... ``လူသားအားလုံးချမ်းမြေ့ပါစေသား´´အားလုံးထဲမှာငါသည်လည်း ပါဝင်ချမ်းမြေ့ပါစေသား။သူတစ်ပါးကိုလည်းခွင့်လွှတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းခွင့်လွှတ်အနာရွတ်မှန်သမျှဆွဲချွတ်ဖယ်ရှားကြပါ။နင်းလာသောခြေထောက်ကိုမြေမှုန့်သဲကျောက်တို့ကခွင့်လွှတ်ကြသလိုမျိုးရိုးသားပြည့်ဝတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။၅။ထမင်းဝိုင်းမှာလျှာနှင့်ခပ်၍စားကြသူများသွားကြားထိုးတံစူးကြလေသည်။စပါးစေ့(၁၀၀)နှင့်သင်လုံလောက်ပါကစပါးစေ့(၁၀၁)နောက်လူအတွက် ဖြစ်ပါစေကွယ်။ဆင်ဖြူတော်မှီပြီးတော့လည်းကြံမစုပ်ကြပါနှင့်၊ကြံကျွေးပြီးတော့လည်းဆင်ကိုနှာမောင်းမဖြုတ်ကြပါနှင့်။ညောင်ရွက်တွေနဲ့မိုးတဲ့ရေအိုးစင်လေးပမာသာယာမြေ့ချမ်းနေပူလမ်းမှာ တွဲခေါ်ကြပါ။အမှန်စင်စစ်ခေါင်းငုံ့ပေးလိုက်ခြင်းဟာခေါင်းမော့ထားရခြင်းလောက်ညောင်းညာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။၀င်သက်နှင့်ယူခဲ့သမျှထွက်သက်နှင့် ပြန်ပေးရမည်။ဒါ ... ကမ္ဘာအစရဲ့ပထမသီအိုရီပဲဖြစ်သည်။ငါကတော့(ရမည်ဆိုပါလျှင်)သေလွန်ပြီးခါမှအင်အားတစ်စပြန်ယူသုံးငါ့အခေါင်းကို ငါပဲဖုံးသွားချင်တော့၏။၆။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တော့လင်းပွင့်မြင့်မြတ်ရဦးမည်။ထို့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို တံမြက်စည်းလှဲပြီးတဖွားဖွား ခြွေချပစ်ရမည်။လက်သီးဆုပ်ခြင်း ... ဆိုတာတုန်ခါဖြူဖျော့ ထော့လန်ကွေးလုပ်လက်ချောင်းတွေအချင်းချင်း ပြန်ဖမ်းချုပ်ကြခြင်းဖြစ်၏။ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒိုင်းနဲ့ကာထားပြီးမှသူတစ်ပါးကို ဓါးဖြင့်ရွယ်ရဲလျှင်သူရဲကောင်းဟု မခေါ်ချင်တစ်ခါကဤလက်တို့အလံလုခဲ့ကြ၏။ထို ... ဆုတံဆိပ်ယခု ဘယ်ဆီချိတ်မည်နည်း။ငါ့ရိပ်မြုံကိုရုပ်ပုံစာတမ်းဘာမှမကပ်တမ်းလမ်းဘေးမှာ မြက်ဖြင့်ဆောက်မည်။မာနကိုဖြေလျော့ရေစင်အေးဖြင့် ငါ ကန်တော့ပါအံ့။ခြေဖ၀ါးမှ ဦးကင်းမေတ္တာဖြူဖြင့် လင်းလိုလှပါတော့သည် ငါ့အရှင် ...။၇။(လောကကြီးသည် အံ့ဖွယ်အတိပြီး၏။နဂိုမူလ တိမ်သည်ဟုထင်ရသော တွင်းများပင်လျှင်ဆင်းကြည့်ခါမှ နက်ရှလှိုက်စားပို၍ ... နိမ့်ဝင်သွားတတ်၏။)ကြက်ခြေခတ် ... ၏ဆုံရပ်မှာနေ ရီဝေထွေပြားသောညများမိုးခါးရနံ့ သင်းပျံ့နေတတ်၏။ငါ့ရှေ့မှလူများငါ့ကိုပိတ်၍ကာထား၏ငါ့နောက်မှလူများငါ့ကိုတွန်း၍ကျော်သွား၏။ထို့နောက် ...ချောက်ကမ္ဘားရောက်မှကြောက်အားဖြင့်လှည့်ပြန်ငါနှင့်တဖန် ...လူချင်းလဲကြပြန်၏။အောင်မြင်ကြပါစေကွယ်နေရောင်လရောင်ဖြန့်ခင်းအလင်းတဝေေ၀နဲ့နေ့တွေညတွေငြိမ်းချမ်းသည်ထက်ငြိမ်းချမ်းပါစေ။သူဖုန်းစားလည်းမြေသားပန်းကန်မှာကောက်နှံပင်တို့ဝေဖြိုးအသရေတိုးသည်ထက်တိုးပါစေ။သူကြွယ်ကြီးလည်းငရဲပြည်ကဓါးကိုရှောင်ရှားပိုင်းချင့်နှိမ့်ချအပ်သောဦးခေါင်းဖြင့်မြင့်သည်ထက်မြင့်ပါစေ။၈။ငိုကြွေးဖို့အတွက်အသက်ဝင်လာသောလူများသစ္စာတရားကိုဟားတိုက်ရယ်မောနေကြသည်။ရှင်သေမင်းကအစွယ်တ၀င်းဝင်းနှင့်စောင့်စားသက်တမ်းကျွံသည်နှင့်တမလွန်မှာအခွံခွါ၍စားလိမ့်မည်။ဟိုစဉ်ခါကငါသည်လည်းစိုးကြောက်ကျောက်တောင်ကို ပန်းနှင့်ပြန်ပေါက်ရင်းခြေမြှောက်လက်မြှေက်ခြောက်ခြားဖူးသည်။တုန်ကောက်မရှိသူ ... နှင့်ချိုင်းထောက်မရှိသူ ...လမ်းလျှောက်ရန်မှာပင်ဒုက္ခချင်းမတူကြ။တဂျောက်ဂျောက်နှင့်ရွှံ့ရုပ်သားကောင်မုဆိုးလိုပြန်လှောင်သည့်မှော်ရုံထောင်ချောက်မျက်လှည့်ဆရာတွေ ကြွေအံခေါက်နေသည်။မျက်စိကိုမှိတ်ပြီးကိုယ်ထဲကို တိတ်တိတ်ကလေးပြန်ကြည့်သောအခါညှို့ပြာယှက်သန်းတစ်လောကလုံး အနက်ရောင်လွှမ်းတော့၏။ထိုသို့ဖြင့်နှင်းရည်စိုသောမှိုပွင့်ကလေး၏ပင်ခြေရင်းမှာမာနကိုအိပ်မွေ့ချထာဝရ ငါ ... ထားခဲ့ချင်ပါပြီလေ။၉။လောကဓံတရားကနဂါးရှစ်ကောင်ပမာမြေကိုထိုးခွဲ လေကိုဆွဲဖြဲလူတွေထဲမှာပျံသန်းသွားလာနေသည်။ယဉ်ကျေးမှုအရတစ်နေရာတွင်ဖိနပ်စီးရသော ငါတို့သည်ယဉ်ကျေးမှုအရပင်တစ်နေရာတွင်ဖိနပ်ချွတ်ရဦးတော့မည်။ဘုရားပြောတာကိုမှငါ... မယုံရဘူးဆိုလျှင်မာရ်နတ်ပြောတာကိုငါ... ယုံရတော့မည်လော။အစိုးမရသောလောက၏နာရီစက်သံကိုလက်တံတို့က မောင်းနှင်ဖန်တီးနီး ...နီး ...နီး၍လာခဲ့ပြီ။မီးကိုကျော်ဖြတ်ရေကိုကျော်ဖြတ်သံချပ်ကာဝတ်ရုံခြုံလို့မလုံပါဘူးကွယ်။တရားရိပ်မှာစိတ်ကိုထုတ်ပြီးဖုန်ခါပြီးတော့ ...ကိုယ်ထဲမှာ ပြန်လည်သော့ပိတ်သုညကလေးလိုငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေရမည်။စေတီအိုဟောင်းမှခေါင်းလောင်းသံ တိုးဖွတိုးညှင်းအို ... အရှင် ...မြေမှထသော ငါ့ကိုမြင်ပါ။၁၀။အချို့သောလူများလယ်ထွန်သွားရင်းနွားပေါ်အိပ်နေကြပါသလား။အချို့သောလူများလယ်ထွန်သွားရင်းစပါးဖြစ်အောင် စိုက်ကြပါသလား။လူသားတစ်ယောက်အနေနှင့်မိုးကောင်းကင်အောက်မှာခိုင်မာကျစ်လျစ်တာဝန်ကျေသော ပေတစ်ဆစ်မျှတော့ဖြစ်သင့်သည်။အရပ်ရပ်မှလာသော လေတို့၌မြေစိုက်ကျောက်တိုိင်တို့မတုန်လှုပ်ကြသကဲ့သို့ငါတို့ နေသွားရမည်။အရှင်ယူဆောင်သည့်ကြယ်တစ်ထောင်မြင့်ခေါင် ၀င်းပသည့်ညကားလွှလွှဖွေးဆွတ်လှံသွားတို့ကိုပင် ခွေညွတ်စေတော့၏။ဓမ္မတေးကိုသွေးအစက်စက်တိုင်အောင်ဖြန်းဆွတ်နှုတ်ဆက်တော်ရွတ်ဆိုသံများတိုးကာ ကျယ်ကာ ငါ ... ကြားနေရ၏။လေပြေညင်းတွင်ရွှေအဆင်းဖြင့် သွားနှင့်ကြသူများဥပေက္ခာကိုဘာမှမပြောဘဲ ထားသွား၏။ထိုသူတို့နောက်ငါ တကောက်ကောက်လိုက်ပါတော့အံ့။ထိုသူတို့နောက်ငါ တောက်လျှောက်လိုက်ပါတော့အံ့။ကြယ်ရောင်ကွေ့ကောက်ထိုသော ကောင်းကင်မျဉ်းကြောင်းများအောက်မှပင်ငါ့အားလမ်းပြစေစားတော်မူပါလော့ ... မြတ်သော ငါ့ ...အရှင်။ ။(ဗုဒ္ဓ ... သို့)တာရာမင်းဝေ “ဓာတ်ပုံလေး” မိုးလုံလေလုံနှလုံးအိမ်ထဲက ဓာတ်ပုံလေးထုတ်.. ထုတ်ကြည့်ဖြစ်တယ် သတိရတိုင်းသတိရတိုင်း ရွှဲနစ်ပါးပြင်ပေါ် မျက်ရည်တွေငါက ဓာတ်ပုံလေးကို တွေရီငေးဓာတ်ပုံလေးက ငါ့ကို တွေရီငေးလွမ်းတယ်.. ။တာရာမင်းဝေ နတ်ပူးနေတဲ့ကောင် လွင့်လိုက်ရတာမုတ်သုန်ဘယ်နှစ်မြို့တိုင်ခဲ့ပြီလဲ၊တယ်လီဖုန်းခေါ်သံတွေကြားတာတောင်ပြန်မထူးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကောင်ပါ။မေမေရေ…မိုးတိမ်ကြီးထဲမှာခြေပစ်လက်ပစ် သား ၀င်အိပ်လိုက်ချင်ရဲ့။ကောင်းကင်ကို ပြန်တည့်ရတာ.…မောတယ်။တာရာမင်းဝေ ဥယျာဉ် နဂါးတွေကသာတကယ်တမ်းကပြမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကြည့်ချင်စိတ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့်မျက်နှာအရေပြားတွန့်တွန့်ကြီးနဲ့လူတွေကနဂါးနှဲမှုတ်ပြီးလူးလွန့်ပြရင်တော့သူတို့အစား…ကိုယ်က ပင်ပန်းပျင်းရိနေတတ်တယ်။အဲဒီလိုပါပဲ ကောင်မလေးရယ်မိုးတွေကတိတ်တာတောင် ကိုယ်ကရွာတုန်း။သစ်ရွက်ကို ကိုယ်ပြန်စိုက်ဖို့ကြိုးစားဆဲမှာသစ်ပင်က ကြွေကျလာခဲ့.ကိုယ်လို ပေကပ်ကပ်ကောင်ကတော့ကျောက်တုန်းတွေကိုလည်း ငုံ့ကြည့်ခင်မင်နေခဲ့၊ကောင်မလေးရေ…တကယ်ဆို ကိုယ်ဟာဥယျာဉ်တစ်ခုပါပဲမြေပြင်မှာ ဘာမှမပွင့်သေးတာက လွဲရင်ပေါ့ကွယ်။တာရာမင်းဝေ အတိတ် ၀တ်မှုန်ဆိုတာပန်းရုံအိအိထဲက အက်တမ်တစ်ပွင့်ပါ။ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။သူအနုမြူဗုံးလို ကွဲလွင့်တဲ့နေ့ကကျွန်တော်…မိုးစက်တွေထဲ သက်ငြိမ်တိတ်ဆိတ်ခဲ့ဖူးပါရဲ့။တာရာမင်းဝေ Labels: ▲kzh1980@gmail.com	posted by kaungzawhtet @ 05:27 PM hits(391)
♥ Happy , Lucky and Healthy For Your Birthday In 14 th , Jan , 2010 ,....
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ယခုကျရောက်လာမယ့်....14 th , Jan , 2010 မွေးနေ့မှသည်.... နောင်နှစ် ၁၂၀ တိုင်....ချစ်သော...အမေ...ညီမလေး နှင့် ....အတူ... သိကျွမ်းခင်မင်ရင်းနှီးသံယောဇဥိဖြစ်ခွင့်ရခဲ့သော....အကိုနှင့်.... ဒီထက်မက...ပိုမိုပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သာယာလှပမှုရှိသော....အနာဂတ်နေ့ရက်တွေဆီ....အရောက်လှမ်းနိုင်ပါကြောင်း.... ရင်ထဲက....ထပ်တူထပ်မျှဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါသည်....။ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Labels: ♥Kaungzawhte>Yangon>Myanmar., ♥	posted by kaungzawhtet @ 03:53 PM hits(189)
Don't miss and crying for true loves,....
A Love For All Time A Special Letter to Win Your Lover Back, Get the Letter Here Breathless kisses Burning touches Soft-spoken words of love Urgently spoken words of passion. A man andawoman One complete love Since time began Predestined to be as one. We've been together before In other lifetimes We've fought dragons And have been torn from each others arms Yet our love prevailed. We've walked on this earth many times together Perhaps foramoment Perhaps for years But our heart is one heart And we were meant to be. So when our time on earth Once again comes toaclose Have no worries my dear For we will find each other again And again And again. For our love is ageless Eternal A love for all time. - Dawn Choike - I Will Love You Till The End A Special Letter to Win Your Lover Back, Get the Letter Here The first day I saw you I knew it was love I got to know you and love you even more you seemed so flawless I wanted to be with you I'm too shy and all the guys I know let the girls make the first move That day was6months after I laid my eyes on you I asked you the question I knew I'd never regret I stared into your beautiful brown eyes as you said I can't right now As tears came to my eyes I said- I need you You whispered in my ear I need you too I walked away My once great life- is now over I had never planned on asking you at all But I felt I must I got home that horrible night The night I know I would always remember I ran into my room As far away from possible from my family My eyes were red and wet I layed on my bed As I was about to cry myself to sleep I received the call from you As fast as I possibly could I picked up the phone You explained everything to me and told me that you wanted me to be with you You asked me to go forawalk So we can talk things over I told you I'd meet you at the beach front I ran into the bathroom to check my makeup I put on more powder, eyeliner and mascara I threw my shoes on and ran out the door You were the only thing on my mind I couldn't think about anything else I wanted to get there as quick as I could So I could be with you I ran so fast Not looking where I was going Then I looked and saw you I ran as fast as I could The speeding car hit me hard Now I'm lying here on the street I looked to the left of me And my arm is terribly cut up I look the the right of me and I saw you Suddenly I felt no pain You layed on the street next to me You told me everything would be okay And You'd always be there for me Now everything is getting dark I'm havingahard time seeing But now that I know you're in my life Everything seems bright I feel myself getting lifted and I feel your soft hand lightly holding mine You looked at me once more and said I love you till the end Now I'm in the hospital The doctors don't seem calm I hear some paramedic say I am short of blood I'm now convinced I'm dying But I still feel no pain I try to lift my hand to touch your hand But I couldn't lift it I'm too weak My arm is broken I tried lifting it again I screamed in agony You sat next to me and told me not to cry that everything is okay and you won't leave my side Now I'm drifting to sleep I can no longer stay awake I'm not sure if I'm going to wake But I really want to You look me in the eyes I remember this faintly from before gazing into your brown eyes you said I will love you forever With all my strength and everything that was in me I said I will love you forever too That probably will be the last thing I say Now hours later I wake up and look beside me I see you I see my family My mom and dad looked horrified to see me in this condition But I was so happy to see them and how they cared about me Aboutayear later now I no longer feel I'm going to die I am now with you And as happy as can be - Jess Lynn - Because Of You Just break up? I sentaspecial letter & now we're back together. Get the letter here I’ve been in darkness for so long just waiting for the light, And now that you have come my way, my days don’t seem like nights. I’m glad I’m finally overcome my fear of the other side, Thank you for showing me the way, by taking me on this ride. I’ve never really felt this way aboutaguy before, You’ve truly touched me deep inside, you’ve opened, unlocked, the door. I know it’s nothing serious, but surely it’sastart, You’ve treated me so equally, I feel it in my heart. And even if this does not work, I’m glad I’ve had this chance, To see how great you truly are, even just foraglance. We never know what’ll come of this, it really just depends, I’m glad we’re taking the first step, we’re becoming better friends. With you I never have to guess just how you really feel, You talk to me about the facts and tell me what’s the deal. With you I feel so comfortable, like nothing can go wrong, I get this tingly feeling inside, you sing to me likeasong. The fact that you are older, really did freak me out, But you treat me like I’m your age, now I’m rid of all my doubts. I’m trying to live in the moment, by forgetting about the past, And so far it’s been working, and it’s really beenablast. So hopefully from this day forth, I’ll know just what to do, If ever I come acrossaguy, another guy like you. - Starburst - Believe In Love Just break up? I sentaspecial letter & now we're back together. Get the letter here Tears of rage return again As I sit again empty-handed I cried before I saidaword I crashed before I landed As I fell through my mistakes I thought of you the entire way Still I hope you love me so Oh, how I pray you’ll stay Flowers bloomed inadead world In all of the wrong places And every time I hear your voice A smile thrives on the saddest of faces You mean the world to me What will I do when you’re gone? Surely I can’t fakeasmile It feels all too wrong Suddenly I can understand What you meant when you’d say “When you’re hurting, I hurt more.” Missing you nearly kills me everyday Who am I to turn to? When my soul has been forsaken? It was always only you That kept me warm when I was shaking. You held me and made me strong Always said the right words I’ve healed because of you, not time And now the old wounds barely hurt Yes, I may have cried over you Over sweet, sad songs that reach my ear But can you really blame me? Oh how I long for you my dear One more time, may I ask? Will you kiss away the pain? Remind me what life’s worth living for Bring down the heavenly rain? Your sweet unwavering thoughts of love, Though I may deny Comfort me like the warmest of blankets Your voice tells me not to cry For the moment I won’t But somehow I know the tears will return I know this because I reach out for you I feel your pain burn. Every thought of you is the sweetest But without you I feel colder than ever I need your love, my comfort We need to be together. You’re the only man who knows What I’m think of. So, tell me, my dear, Do you still believe in love? - Angelic Grace - Labels: posted by kaungzawhtet @ 03:54 PM hits(145)
Loves quotes saying and answers,....
Albert Einstein:Gravitation is not responsible for people falling in love.Albert Einstein:How on earth are you ever going to explain in terms of chemistry and physics so importantabiological phenomenon as first love?Albert Schweitzer:Thought cannot avoid the ethical or reverence and love for all life. It will abandon the old confined systems of ethics and be forced to recognize the ethics that knows no bounds. But on the other hand, those who believe in love for all creation must realize clearly the difficulties involved in the problem ofaboundless ethic and must be resolved not to veil from [humankind] the conflicts which this ethic will involve [us], but allow [us] really to experience them. To think out in every implication the ethic of love for all creation -- this is the difficult task which confronts our age.â€Alfred Adler:We only regard those unions as real examples of love and real marriages in whichafixed and unalterable decision has been taken. If men or women contemplate an escape, they do not collect all their powers for the task. In none of the serious and important tasks of life do we arrange sucha"getaway." We cannot love and be limited.Alfred Tennyson:I hold it true, whate'er befall;I feel it, when I sorrow most;'Tis better to have loved and lostThan never to have loved at all.Allan K. Chalmers:The Grand essentials of happiness are: something to do, something to love, and something to hope for.Ambrose Bierce:Love:atemporary insanity, curable by marriage.Amy Bloom:Love at first sight is easy to understand; it's when two people have been looking at each other foralifetime that it becomesamiracle.Amy Tan:I am likeafalling star who has finally found her place next to another inalovely constellation, where we will sparkle in the heavens forever.Anais Nin:Love never diesanatural death. It dies because we don't know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of witherings, of tarnishings.Ann Landers:If you have love in your life it can make up foragreat many things you lack. If you don't have it, no matter what else there is, it's not enough.Anne Morrow Lindbergh:Him that I love, I wish to be free -- even from me.Antoine de Saint-Exupery:Love does not consist of gazing at each other, but in looking together in the same direction.Arthur Rubinstein:Love life and life will love you back. Love people and they will love you back.Barbara De Angelis:Love isachoice you make from moment to moment.Barbara De Angelis:Love isachoice you make from moment to moment.Barbara De Angelis:Love and kindness are never wasted. They always makeadifference. They bless the one who receives them, and they bless you, the giver.Barbara De Angelis:If you aren't good at loving yourself, you will haveadifficult time loving anyone, since you'll resent the time and energy you give another person that you aren't even giving to yourself.Bayard Rustin:When I say I love Eastland, it sounds preposterous --aman who brutalizes people. But you love him or you wouldn't be here. You're going to Mississippi to create social change -- and you love Eastland in your desire to create conditions which will redeem his children. Loving your enemy is manifest in putting your arms not around the man but around the social situation, to take power from those who misuse it -- at which point they can become human too.Bayard Taylor:I love thee, I love but theeWithalove that shall not dieTill the sun grows cold,And the stars grow old...Bertrand Russell:The good life is inspired by love and guided by knowledge.Bertrand Russell:Three passions have governed my life:The longings for love, the search for knowledge,And unbearable pity for the suffering of [humankind].Love brings ecstasy and relieves loneliness.In the union of love I have seenInamystic miniature the prefiguring visionOf the heavens that saints and poets have imagined.With equal passion I have sought knowledge.I have wished to understand the hearts of [people].I have wished to know why the stars shine.Love and knowledge led upwards to the heavens,But always pity brought me back to earth;Cries of pain reverberated in my heartOf children in famine, of victims torturedAnd of old people left helpless.I long to alleviate the evil, but I cannot,And I too suffer.This has been my life; I found it worth living.adaptedBertrand Russell:A sense of duty is useful in work, but offensive in personal relations. People wish to be liked, not be endured with patient resignation.Bible:Love is patient, love is kind.It does not envy, it does not boast, it is not proud.It is not rude, it is not self-seeking.It is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Love does not delight in evil, but rejoices with the truth.It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.Love never fails.I Corinthians 13:4-8Blaise Pascal:The heart has its reasons which reason knows not of.C.S. Lewis:Why love if losing hurts so much? We love to know that we are not alone.Carl Jung:Where love rules, there is no will to power; and where power predominates, there love is lacking. The one is the shadow of the other.Carter Heyward:Love, like truth and beauty, is concrete. Love is not fundamentallyasweet feeling; not, at heart,amatter of sentiment, attachment, or being "drawn toward." Love is active, effective,amatter of making reciprocal and mutually beneficial relation with one's friends and enemies.This entry continued ...Charles Augustin Sainte-Beuve:Tell me who admires and loves you,And I will tell you who you are.Chaucer:For there is one thing I can safely say: that those bound by love must obey each other if they are to keep company long. Love will not be constrained by mastery; when mastery comes, the God of love at once beats his wings, and farewell -- he is gone. Love isathing as free as any spirit; women naturally desire liberty, and not to be constrained like slaves; and so do men, if I shall tell the truth.This entry continued ...Dale Evans:Every time we love, every time we give, it's Christmas.David Ferenc:We need not think alike to love alike.Denis Waitley:Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace and gratitude.Diane Arbus :Love involvesapeculiar unfathomable combination of understanding and misunderstanding.Don Byas:You call it madness, but I call it love.E.M. Forster:Only connect! That was the whole of her sermon. Only connect the prose and the passion, and both will be exalted, and human love will be seen at its height. Live in fragments no longer. Only connect...Ecclesiastes:For everything there isaseason,Andatime for every matter under heaven:A time to be born, andatime to die;A time to plant, andatime to pluck up what is planted;A time to kill, andatime to heal;A time to break down, andatime to build up;A time to weep, andatime to laugh;A time to mourn, andatime to dance;A time to throw away stones, andatime to gather stones together;A time to embrace, Andatime to refrain from embracing;A time to seek, andatime to lose;A time to keep, andatime to throw away;A time to tear, andatime to sew;A time to keep silence, andatime to speak;A time to love, andatime to hate,A time for war, andatime for peace.Ecclesiastes 3:1-8Edna St. Vincent Millay:Life isaquest and loveaquarrel ...Edna St. Vincent Millay:I love humanity but I hate people.Elbert Hubbard:The love we give away is the only love we keep.Elie Wiesel:The opposite of love is not hate, it's indifference.The opposite of art is not ugliness, it's indifference.The opposite of faith is not heresy, it's indifference.And the opposite of life is not death, it's indifference.(Oct. 1986)Elie Wiesel:Friendship marksalife even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.Elizabeth Barret Browning:Whoso loves, believes the impossible.Elizabeth Barrett Browning :I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you. I love you not only for what you have made of yourself, but for what you are making of me. I love you for the part of me that you bring out.Ella Wheeler Wilcox:All love that has not friendship for its base,Is likeamansion built upon the sand.Emily Dickinson:That Love is all there is,Is all we know of Love.Emily Dickinson:Who has not found the heaven belowWill fail of it above.God's residence is next to min,His furniture is love.Emily Dickinson:Love -- is anterior to Life --Posterior -- to Death --Initial of Creation, andThe Exponent of Earth --Emma Goldman:Free love? As if love is anything but free! Man has bought brains, but all the millions in the world have failed to buy love. Man has subdued bodies, but all the power on earth has been unable to subdue love. Man has conquered whole nations, but all his armies could not conquer love. Man has chained and fettered the spirit, but he has been utterly helpless before love. High onathrone, with all the splendor and pomp his gold can command, man is yet poor and desolate, if love passes him by. And if it stays, the poorest hovel is radiant with warmth, with life and color. Thus love has the magic power to make ofabeggaraking. Yes, love is free; it can dwell in no other atmosphere.Erich Fromm:Infantile love follows the principle: "I love because I am loved."Mature love follows the principle: "I am loved because I love."Immature love says: "I love you because I need you."Mature love says: "I need you because I love you."Ernest Becker:When we understand that man is the only animal who must create meaning, who must openawedge into neutral nature, we already understand the essence of love. Love is the problem of an animal who must find life, createadialogue with nature in order to experience his own being.Euripides:He is notalover who does not love forever.Felix Adler:Love is the expansion of two natures in such fashion that each include the other, each is enriched by the other.Francis David:We need not think alike to love alike.Franklin P. Jones:Love doesn't make the world go 'round; love is what makes the ride worthwhile.Friedrich Nietzsche:The demand to be loved is the greatest of all arrogant presumptions.Friedrich Nietzsche:It is notalack of love, butalack of friendship that makes unhappy marriages.Gary Zukav:Eventually you will come to understand that love heals everything, and love is all there is.Georg C. Lichtenberg:Love is blind, but marriage restores its sight.George Jean Nathan:Love is an emotion experienced by the many and enjoyed by the few.George MacDonald:To be trusted isagreater compliment than to be loved.George Sand:There is only one happiness in life, to love and be loved.George Santayana:Love is only half the illusion; the lover, but not his love, is deceived.The Life of Reason, 1905-1906Goethe:To be loved for what one is, is the greatest exception. The great majority love in others only what they lend him, their own selves, their version of him.H. L. Mencken:To be in love is merely to be inastate of perceptual anesthesia -- to mistake an ordinary young man foraGreek god or an ordinary young woman foragoddess.Prejudices, 1919H.H. the Dalai Lama:Responsibility does not only lie with the leaders of our countries or with those who have been appointed or elected to doaparticular job. It lies with each of us individually. Peace, for example, starts within each one of us. When we have inner peace, we can be at peace with those around us.This entry continued ...H.H. the Dalai Lama:When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace.H.H. the Dalai Lama:We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection.Han Suyin [Elizabeth Comber]:...love from one being to another can only be that two solitudes come nearer, recognize and protect and comfort each other.b. 1917 Chinese writer and physicianHazrat Inayat Khan:The sage said, "The best thing is not to hate anyone, only to love. That is the only way out of it. As soon as you have forgiven those whom you hate, you have gotten rid of them. Then you have no reason to hate them; you just forget.Spiritual Dimensions of PsychologyHelen Keller:Have you ever been at sea inadense fog, when it seemed as ifatangible white darkness shut you in and the great ship, tense and anxious, groped her way toward the shore with plummet and sounding-line, and you waited with beating heart for something to happen? I was like that ship before my education began, only I was without compass or sounding line, and no way of knowing how near the harbor was. "Light! Give me light!" was the wordless cry of my soul, and the light of love shone on me in that very hour.Henri Nouwen:Your body needs to be held and to hold, to be touched and to touch. None of these needs is to be despised, denied, or repressed. But you have to keep searching for your body's deeper need, the need for genuine love. Every time you are able to go beyond the body's superficial desires for love, you are bringing your body home and moving toward integration and unity.Henry David Thoreau:Love must be as muchalight as it isaflame.Henry David Thoreau:There is no remedy for love but to love more.Henry Miller:The real enemy can always be met and conquered, or won over. Real antagonism is based on love,alove which has not recognized itself.Henry Miller:The one thing we can never get enough of is love. And the one thing we can never give enough of is love.Henry Wadsworth Longfellow:If I am not worth the wooing, I am surely not worth the winning.Herman Hesse:If I know what love is, it is because of you.Hermann Hesse:You know quite well, deep within you, that there is onlyasingle magic,asingle power,asingle salvation...and that is called loving. Well, then, love your suffering. Do not resist it, do not flee from it. It is your aversion that hurts, nothing else.Hobbes (of Calvin and ...):I think we dream so we don't have to be apart so long. If we're in each others dreams, we can be together all the time.Houssaye:Tell me whom you love and I will tell you who you are.Ingrid Bergman:A kiss isalovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.Iris Murdock:We can only learn to love by loving.Isha McKenzie-Mavinga:On reflection, one of the things I needed to learn was to allow myself to be loved.James Baldwin:The face ofalover is an unknown, precisely because it is invested with so much of oneself. It isamystery, containing, like all mysteries, the possibility of torment.Another Country, 1962James D. Bryden:Love does not die easily. It isaliving thing. It thrives in the face of all of life's hazards, save one -- neglect.James Thurber and E.B. White:Love is the strange bewilderment which overtakes one person on account of another person.Jane Austen:Friendship is the finest balm for the pangs of despised love.Jane Austen:One does not loveaplace the less for having suffered in it unless it has all been suffering, nothing but suffering.Jean Baptiste Henry Lacordaire:We are the leaves of one branch, the drops of one sea, the flowers of one garden.Jean Goss:All ideologies end up killing people. If you separate love from nonviolence you turn nonviolence into an ideology,agimmick. Structures that are not inhabited by justice and love have no liberating or reconciling force, and are never sources of life.Jeanne Moreau:Age does not protect you from love, but love to some extent protects you from age.Jessamyn West:A religious awakening which does not awaken the sleeper to love has roused him in vain.The Quaker Reader, 1962Jimi Hendrix:When the power of love overcomes the love of power the world will know peace.Joan Vinge:Indifference is the strongest force in the universe. It makes everything it touches meaningless. Love and hate don't standachance against it.The Snow QueenJohn Lennon:Love isapromise, love isasouvenir, once given never forgotten, never let it disappear.Jonathan Swift:We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.Kahlil Gibran:Wake at dawn withawinged heart and give thanks for another day of loving.Karl Menninger:Love cures people -- both the ones who give it and the ones who receive it.Katharine Hepburn:Sometimes I wonder if men and women really suit each other. Perhaps they should live next door and just visit now and then.Lily Tomlin:If love is the answer, could you rephrase the question?Lisa Hoffman:Love is like pi - natural, irrational, and very important.M. Scott Peck:Although the act of nurturing another's spiritual growth has the effect of nurturing one's own,amajor characteristic of genuine love is that the distinction between oneself and the other is always maintained and preserved.Madeleine de Scudery:Love makes mutes of those who habitually speak most fluently.Marc Estrin:Kindness trumps greed: it asks for sharing. Kindness trumps fear: it calls forth gratefulness and love. Kindness trumps even stupidity, for with sharing and love, one learns.Marcel Proust:In reality, in love there isapermanent suffering which joy neutralizes, renders virtual, delays, but which can at any moment become what it would have become long earlier if one had not obtained what one wanted, atrocious.Margaret Anderson:In real love you want the other person's good. In romantic love you want the other person.Margaret Guenther:[W]e all need friends with whom we can speak of our deepest concerns, and who do not fear to speak the truth in love to us.Mark Twain:Love seems the swiftest, but it is the slowest of all growths. No man or woman really knows what perfect love is until they have been marriedaquarter ofacentury.Mark Twain:Love seems the swiftest, but it is the slowest of all growths. No man or woman really knows what perfect love is until they have been marriedaquarter ofacentury.Mark Twain:After all these years, I see that I was mistaken about Eve in the beginning; it is better to live outside the Garden with her than inside it without her.Adam, in Adam's DiaryMartin Luther King, Jr.:Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.Martin Luther King, jr.:We must develop and maintain the capacity to forgive. He who is devoid of the power to forgive is devoid of the power to love. There is some good in the worst of us and some evil in the best of us. When we discover this, we are less prone to hate our enemies.Martin Luther King, jr.:At the center of nonviolence stands the principle of love.Martin Luther King, jr.:I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.Mary Oliver:To live in this world you must be able to do three things: to love what is mortal; to hold it against your bones knowing your own life depends on it; and, when the time comes to let it go, to let it go. Blackwater WoodsMary Parrish:Love vanquishes time. To lovers,amoment can be eternity, eternity can be the tick ofaclock.Mary S. Calderone:I truly feel that there are as many ways of loving as there are people in the world and as there are days in the life of those people.Matthew Arnold:Is it so smallathingTo have enjoy'd the sun,To have lived light in the spring,To have loved, to have thought, to have done...Mitsugi Saotome:If you were all alone in the universe with no one to talk to, no one with which to share the beauty of the stars, to laugh with, to touch, what would be your purpose in life? It is other life, it is love, which gives your life meaning. This is harmony. We must discover the joy of each other, the joy of challenge, the joy of growth.Mohandas K. Gandhi:Hatred ever kills, love never dies. Such is the vast difference between the two. What is obtained by love is retained for all time. What is obtained by hatred provesaburden in reality for it increases hatred.Mohandas K. Gandhi:Where there is love there is life.Mohandas K. Gandhi:Whether humanity will consciously follow the law of love, I do not know. But that need not disturb me. The law will work just as the law of gravitation works, whether we accept it or not. The person who discovered the law of love wasafar greater scientist than any of our modern scientists. Only our explorations have not gone far enough and so it is not possible for everyone to see all its workings.Mohandas K. Gandhi:Forgiveness is choosing to love. It is the first skill of self-giving love.Molleen Matsumura:Love is more than justafeeling: it'saprocess requiring continual attention. Loving well takes laughter, loyalty, and wanting more to be able to say, "I understand" than to hear, "You're right." (1999)Molleen Matsumura:Love is likeacampfire: It may be sparked quickly, and at first the kindling throws outalot of heat, but it burns out quickly. For long lasting, steady warmth (with delightful bursts of intense heat from time to time), you must carefully tend the fire. (2007)Molly Haskell:But one of the attributes of love, like art, is to bring harmony and order out of chaos, to introduce meaning and affect where before there was none, to give rhythmic variations, highs and lows toalandscape that was previously flat.Mother Teresa:The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.Mother Teresa:Let us not be satisfied with just giving money. Money is not enough, money can be got, but they need your hearts to love them. So, spread your love everywhere you go.Nathaniel Hawthorne:It is to the credit of human nature, that, except where its selfishness is brought into play, it loves more readily than it hates. Hatred, byagradual and quiet process, will even be transformed to love, unless the change be impeded byacontinually new irritation of the original feeling of hostility.from The Scarlet LetterNorman Lindsay:The best love affairs are those we never had.Oscar Hammerstein, II:Do you love me because I'm beautiful,or am I am beautiful because you love me?Oscar Wilde:Keep love in your heart. A life without it is likeasunless garden when the flowers are dead. The consciousness of loving and being loved bringsawarmth and richness to life that nothing else can bring.Oscar Wilde:Each time that one loves is the only time one has ever loved. Difference of object does not alter singleness of passion. It merely intensifies it. We can have but one great experience at best, and the secret of life is to reproduce that experience as often as possible.The Picture of Dorian GrayPaul Tillich:The first duty of love is to listen.Pearl Bailey:What the world really needs is more love and less paperwork.Pearl S. Buck:A good marriage is one which allows for change and growth in the individuals and in the way they express their love.Pearl S. Buck:The person who tries to live alone will not succeed asahuman being. His heart withers if it does not answer another heart. His mind shrinks away if he hears only the echoes of his own thoughts and finds no other inspiration.Pearl S. Buck:I love people. I love my family, my children . . . but inside myself isaplace where I live all alone and that's where you renew your springs that never dry up.Rainer Maria Rilke:For one human being to love another: that is perhaps the most difficult of our tasks; the ultimate, the last test and proof, the work for which all other work is but preparation.Ralph Waldo Emerson:Religion is to do right. It is to love, it is to serve, it is to think, it is to be humble.Reinhold Niebuhr:Nothing worth doing is completed in our lifetime,Therefore, we are saved by hope.Nothing true or beautiful or good makes complete sense in any immediate context of history;Therefore, we are saved by faith.Nothing we do, however virtuous, can be accomplished alone.Therefore, we are saved by love.No virtuous act is quiteavirtuous from the standpoint of our friend or foe as from our own;Therefore, we are saved by the final form of love which is forgiveness.Robert Frost:Earth's the right place for love. I don't know where it's likely to go better.BirchesRobert Fulghum:I believe that imagination is stronger than knowledge -- myth is more potent than history -- dreams are more powerful than facts -- hope always triumphs over experience -- laughter is the cure for grief -- love is stronger than death.Robert G. Ingersoll:Love is the only bow on life's dark cloud.It is the Morning and the Evening Star.It shines upon the cradle of the babe,and sheds its radiance upon the quiet tomb.It is the mother of Art,inspirer of poet, patriot, and philosopher.It is the air and light of every heart, builder of every home,kindler of every fire on every hearth.It was the first to dream of immortality.It fills the world with melody,for Music is the voice of Love.Love is the magician, the enchanter,that changes worthless things to joy,and makes right royal kings and queens of common clay.It is the perfume of the wondrous flower -- the heartand without that sacred passion, that divine swoon,we are less than beasts;but with it, earth is heavenand we are gods.Robert Heinlein:Love isacondition in which the happiness of another person is essential to your own.Roger de Bussy-Rabutin:Absence is to love as wind is to fire; it extinguishes the small and kindles the great.Rose Walker:Have you even been in love? Horrible, isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens your heart and it means someone can get inside you and mess you up. You build up all these defenses. You build up this whole armor, for years, so nothing can hurt you, then one stupid person, no different from any other stupid person, wanders into your stupid life...This entry continued ...Roy Croft:I love youNot only for what you areBut for what I amWhen I am with youLove (first stanza)Rumi:Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it.Rumi:Come out of the circle of timeAnd into the circle of love.Rumi:Let the lover be disgraceful, crazy, absent-minded.Someone sober will worry about events going badly.Let the lover be.Rumi:Let yourself be silently drawn by the stronger pull of what you really love.Saint Francis de Sales:You learn to speak by speaking, to study by studying, to run by running, to work by working; and just so, you learn to love by loving. All those who think to learn in any other way deceive themselves.Samuel Butler:Perhaps; but is it not Tennyson who has said: "'Tis better to have loved and lost, than never to have lost at all"? in The Way of All FleshSharon Welch:Resistance to oppression is often based onalove that leads us to value ourselves, and leads us to hope for morethan the established cultural system is willing to grant ... such love is far more energizing than guilt, duty, or self-sacrifice. Love for others leads us to accept accountability (in contrast to feeling guilt) and motivates our search for ways to end our complicity with structures of oppression. Solidarity does not require self-sacrifice, but an enlargement of the self to include community with others. [The Feminist Ethic of Risk]Simone Weil:The love of our neighbor in all its fullness simply means being able to say, "What are you going through?"Sir Arthur Pinero:Those who love deeply never grow old; they may die of old age, but they die young.Song of Solomon:This is my beloved and this is my friend.Spanish proverb:Where there is love, there is pain.St. Augustine:Better to have loved and lost, than to have never loved at all.Søren Kierkegaard:Love does not alter the beloved, it alters itself.Thomas Merton:It is in deep solitude that I find the gentleness with which I can truly love my brothers. The more solitary I am the more affection I have for them…. Solitude and silence teach me to love my brothers for what they are, not for what they say.Tom Robbins:The bottom line is that (a) people are never perfect, but love can be, (b) that is the one and only way that the mediocre and vile can be transformed, and (c) doing that makes it that. We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.Still Life With WoodpeckerTruman Capote:The true beloveds of this world are in their lover's eyes lilacs opening, ship lights, school bells,alandscape, remembered conversations, friends,achild's Sunday, lost voices, one's favorite suit, autumn and all seasons, memory, yes, it being the earth and water of existence, memory.Other Voices, Other Rooms, 1948Unknown:Love is blind, but friendship closes its eyes.Ursula K. LeGuin:Love doesn't just sit there likeastone; it has to be made, like bread, remade all the time, made new.Ursula LeGuin:Love doesn't sit there likeastone. It has to made like bread; remade all the time, made new.Victor Frankl:A man who becomes conscious of the responsibility he bears towardahuman being who affectionately waits for him, or to an unfinished work, will never be able to throw away his life. He knows the "why" for his existence, and will be able to bear almost any "how."Victor Hugo:Life is the flower for which love is the honey.W.H. Murray:...the more the soul knows, the more she loves, and loving much, she tastes much.from the journal of his Himalayan expeditionWashington Irving:Love is never lost. If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart.Willa Cather:Where there is great love, there are always miracles.Willa Cather:Old men are like that, you know. It makes them feel important to think they are in love with somebody.William Arthur Ward:Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget you. Love me and I may be forced to love you.William E. Gladstone :We look forward to the time when the Power of Love will replace the Love of Power. Then will our world know the blessings of peace.William Shakespeare:Love all, trustafew.William Shakespeare:My bounty is as boundless as the sea,My love as deep; the more I give to thee,The more I have, for both are infinite."Romeo and Juliet"William Shakespeare:Self-love, my liege, is not so vileasin, as self-neglecting.William Sloane Coffin:The world is too dangerous for anything but truth and too small for anything but love.William Sloane Coffin, Jr.:Love measures our stature: the more we love, the bigger we are. There is no smaller package in all the world than that ofaman all wrapped up in himself.William Wordsworth:The little unremembered acts of kindness and love are the best parts ofaperson's life.Wolfgang Amadeus Mozart:Neitheralofty degree of intelligence nor imagination nor both together go to the making of genius. Love, love, love, that is the soul of genius.Zelda Fitzgerald:Nobody has ever measured, not even poets, how muchaheart can hold.Zora Neale Hurston:Love makes your soul crawl out from its hiding place.Zora Neale Hurston:Love, I find, is like singing. Everybody can do enough to satisfy themselves, though it may not impress the neighbors as being very much. Labels: Kaungzawhtet>Yangon>Myanmar.	posted by kaungzawhtet @ 02:28 PM hits(214)
<< Start < Prev 123 Next > End >>	5
Results 1 - 30 of 79	kaungzawhtet	View my complete profile Join This Blog
♣ '' PE NYUNT WAY, BAGAN DRAWING, 2010 '' ♣ my online friends အားလုံးတို့ကို....ကြိုဆိုပါတယ်...
»»» read more Archives